အနှစ်သာရ: April 2008
“ အိမ်ထောင်ဦး ဘုရားတည်၊ ဆေးမင်ရည် စုတ်ထိုး၊ သည်သုံးမျိုး ချက်မပိုင်လျှင်၊ နောင်ပြင်ရန် ခက်ခဲကြုံလိမ့် “ ဟူသော စကားသည် ယောက်ျား နှင့် မိန်းမ နှစ်ဦးစလုံးအတွက် သက်ဆိုင်ပေသည်။
သို့သော် အိမ်ထောင်ဦး ဟူသော စကား၌ အိမ်ထောင်ပြုကြရာတွင် ယောက်ျား နှင့် မိန်းမ မတူကြပါ။ ယောက်ျား နှင့် မိန်းမကြား တစ်သက်တာ အတိုင်းအဆမဲ့ ရင်းနှီးစွာ တာဝန်ယူနိုင်ရန် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ကတိသစ္စာဖြင့် လက်ထပ်ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း လက်ထပ်ခြင်းအပေါ် ယူဆမှု ခြားနားပါသည်။
ယောက်ျားသည် မိန်းမကို မိမိ၏ ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်းများအနက် ပစ္စည်းအသစ်တစ်ခုအဖြစ် ရည်ရွယ်ပြီး မိန်းမသည် ယောက်ျားကို မိမိအား အကာအကွယ်ပေးမည့် ကောင်းကင်သစ်တစ်ခုအဖြစ် ရည်ရွယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် မိန်းကလေးများသည် လက်မထပ်မီကပင် “ ဘုန်းတိုးသူ ယောက်ျားဟုတ်၊ မဟုတ် သိရှိ ရပေမည် “။
“ မိုးသောက်နေပေါ်၊ ကျူးကျော်အိပ်ခြင်း၊ ပျင်းရိကြမ်းကြုတ်၊ သောက်ထုတ်သေစာ၊ ဝေးမြေတာသို့၊ သွားလာကိုယ်ထူး၊ အိမ်ရာကျူးဟု၊ ခြောက်ဦးပုဂ္ဂိုလ်၊ စည်းစိမ်တို၍၊ ပျက်ပြိုး နွမ်းညှိုး၊ ဘုန်းမတိုးဟု …ဟူသော မဃဒေဝ လင်္ကာ ပုဒ်ရေ ၂၄၂ အရ…
(၁) မိုးသောက်၊ နေထွက် အိပ်စက်သူ၊
(၃) ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်သောသူ၊
(၄) ဝေးမြေ ရပ်ခြားသို့ တစ်ဦးတည်း သွားတတ်သူ၊
(၅) အရက်သေစာ သောက်စား မူးယစ် တတ်သူ၊
(၆) သူတစ်ပါးအိမ်ရာ ကျူးလွန်တတ်သူ၊
ခြောက်ဦးကို လက်ထပ်မိသော အမျိုးသမီးများသည်လည်း ဘုန်းကံ တိုးတက်လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ၊ အမျိူးသမီးတို့၏ ဘုန်းတန်ခိုး တိုးတက်မှုသည် ယောက်ျားတို့ အပေါ်၌ တည်မှီနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဆိုသည်မှာ ယောက်ျားများက သူတို့၏ လွတ်လပ်မှုကို လောင်းကြေးအဖြစ် ထား၍ မိန်းမများက သူတို့၏ ပျော်ရွှင်မှုကို လောင်းကြေးအဖြစ် ထားရသော အလောင်းအစားတစ်ခု ဖြစ်သည်။
မည်သည့် မိန်းကလေးမဆို သူမတို့၏ ပျော်ရွှင်မှုကို မဆုံးရှုံးလိုကြပါ၊ အိမ်ထောင်သည် ဘဝတိုင် ဆက်လက် တည်မြဲလိုကြသည်။ ထိုပျော်ရွှင်မှုမျိုးသည် စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ချမ်းသာခြင်း နှစ်မျိုးပြည့်စုံမှသာ ရှိနိုင်ပေသည်။
ထို့ကြောင့် “ မဆင်မခြင် အိမ်ထောင်ကျ၊ နောက်မှ နောင်တရ “ မဖြစ်ကြလေအောင် “ ပါသုံးပါ၊ ချာသုံးချာ၊ ကွာသုံးကွာ အိမ်ထောင်မှု၊ မပြုရှောင်လေပါ “ ဟု ဆိုချင်ပါသည်။
“ ပါသုံးပါ “ ဆိုသည်မှာ -
(၁) ကြွေးများ ပါလာသူ၊
(၂) ရောဂါများ ပါလာသူ၊
(၃) အပိုစားမည့်သူ ပါလာသူ၊
“ချာသုံးချာ “ ဆိုသည်မှာ -
(၁) ပညာအရည်အချင်း နုံချာသူ၊
(၂) အလုပ်အကိုင် နုံချာသူ၊
(၃) အကျင့်စာရိတ္တ နုံချာသူ၊
“ ကွာသုံးကွာ “ ဆိုသည်မှာ -
(၁) နိုင်ငံ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာ ကွာခြားသူ၊
(၂) အယူဝါဒချင်း ကွာခြားသူ၊
(၃) စိတ်နေသဘောထားချင်း ကွာခြားသူ
(၁) သုညဘဝက စရမည်ကို မကြောက်သော သူသည် ယောက်ျားကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်သော်လည်း မိမိလက်ထပ်မည့် ယောက်ျားသည်ကြွေးများ ထူလျက် အနုတ်လက္ခဏာက စရမည်ဆိုလျှင် သင်တို့၏ ပျော်ရွှင်မှု လောင်းကြေးသည် အနိုင်ရတော့မည် မဟုတ်ပေ။
(၂) “ အိပ်(ခ်ျ) အိုင်ဗွီ၊ အေအိုင်ဒီအက်(စ်) “၊ ကာလသားရောဂါ နှင့် အဆုတ်ရောဂါစသော ကူးစက်တတ်သည့် ရောဂါများရှိနေသည့် ယောက်ျားတစ်ယောက် နှင့် လက်ထပ်မည်ဆိုလျှင် ထိုရောဂါများသည် သင်တို့ဆီသို့ အနှေးနှင့်အမြန် ဆိုသလို ကူးစက်တော့မည်၊ မွေးလာမည့် သားစဉ်၊ မြေးဆက်သည်လည်း လူစဉ် မမီနိုင်တော့ချေ၊ လင်က ရောဂါရှိ၊ ထိုရောဂါက သင့်ကိုကူး၊ သား, သမီးများမှာ ရောဂါရ၊ ထိုအခါ နှလုံးသားထဲကလာသော ပျော်ရွှင်မှုမျိုး သင့်မှာ ရှိနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
(၃) မိမိ အိမ်ထောင်စု၏ အကျိုးကို လုံးဝ မပြု၊ စားရုံသက်သက်သာ ယောက်ျားဘက်က အပိုတစ်ယောက် ပါလာခဲ့လျှင် ရင်ထဲက လာသည့် လှိုက်လှဲသောအပြုံးများ နေ့စဉ် ပျောက်ကွယ်တော့မည်။
(၄) ကုန်ရောင်း / ကုန်ဝယ် လုပ်မည့် ကြံတော့ တွက်ရေးက မတတ်၊ ငါးရာကျပ်တန်နှင့် ငါးဆယ်ကျပ်တန် မခွဲတတ်။
(၅) ကာယကို ရင်းမည့် ကြံတော့ ပေါက်ချွန်း နှင့် ပေါက်ဆိန် ကွဲပြားစွာ မသိ၊ ထိုကဲ့သို့သော ယောက်ျားမျိုးကို ယူလျှင် သင်သာ အိမ်ထောင်ဦးစီး ဖြစ်တော့မည်။
(၆) အရက်သောက်၊ ဖဲရိုက်၊ မိန်းမပွေ စသည့် မကောင်းမှုမှန်သမျှ အကုန်လုပ်နေသောသူအား “ သင်က ကောင်းမှုမြတ်နိုးခဲ့လျှင် “ လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော် သဘောမနော ကြည်ဖြူစွာနှင့် ဘဝခရီးလမ်း ဖြောင့်တန်းစွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
တူနှစ်ကိုယ် တဲအိုပျက်မှာ ထမင်းရည်ကို အတူလျက်နိုင်သည်မှာ ချစ်သူတို့ သဘာဝ ပြောဆိုကြသော်လည်း ပုံမှန် စားဝတ်နေရေးတို့မှ ဖြည့်ဆည်း မပေးနိုင်လောက်အောင် ဆင်းရဲ၊ နုံ့ချာလှသောသူနှင့် ဘဝတစ်သက်တာ အတူနေရမည့် သင်၏ ပျော်ရွှင်မှု သုခ အတိုင်းအတာ အင်မတန် နည်းပေလိမ့်မည်။
(၇) အမိတိုင်းပြည်၊ မိမိမွေးရပ်မြေ၊ အဖေ၊ အမေ၊ ဆွေမျိုးသားချင်းများ စသည်တို့ကို စွန့်ခွာပြီး နှလုံးသား ဘာသာမဟုတ်၊ အတတ်ပညာဘာသာ နှင့် ပြောဆို ဆက်ဆံရသော တိုင်းတစ်ပါးသားနှင့် အတူ နေရမည်ဆိုလျှင် သင်၏ သုခသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာ ပြည့်စုံကောင်း ပြည့်စုံပေမည်။
(၈) ငြိမ်းအေး သာယာမှုချမ်းသာအစစ်ကို ပေးနိုင်စွမ်းသော ဗုဒ္ဓအရိပ်အာဝါသမှ ထွက်ခွာပြီး အယူအဆမှားကို ယုံကြည် ကိုးကွယ်ရမည် ဆိုလျှင် သင်၏ နောက်ဘဝအတိုင်းအတာကို တွေးတောကြည့်လိုက်ပါ။
(၉) အရာရာတိုင်း အယူအဆချင်း မတူသူ၊ စိတ်နေသဘောထားချင်း ကွာခြားသူနှစ်ယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင် နေနိုင်ရန် လွယ်ကူမည် မဟုတ်၊ ဝိရောဓိအသွင် အမြဲ ဆောင်နေ၍ စိတ်ချမ်းသာမှုလည်း အမြဲ ကင်းဝေးနေလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် အထက်မှ အချက် ၉-ချက်တွင် တစ်ခုခုနှင့် ကိုက်ညီသူ၊ အထူးသဖြင့် နံပါတ် “ ၇၊ ၈၊ ၉” နှင့် ကိုက်ညီသူတို့ကို လက်ထပ်ရန် မသင့်ပေ။
ထို့ပြင် “ လင်ဆိုးမယား တဖားဖား “ “ ကုန်ရှုံးတစ်ခေါက်၊ လင်ကုန်ရှုံး တစ်သက်လုံးမှောက် “ စသည်တို့ကို မဖြစ်ရလေအောင် အောက်ပါ ရှောင်ရန် အချက် ၅- ချက်ကို ထပ်မံ၍ လိုက်နာလိုက်ပါ။
(၁) ပညာသင်ရမည့် ကျောင်းသားအရွယ် ပညာမသင်ဘဲနှင့် ပြင်ပ အပျော်အပါးများတွင် အချိန်ကုန်ကာ ရုံးပြင်ကနား ပေါက်ပေါက်ရောက်ရောက် မရှိ၊ ပင်ပန်း ဆင်းရဲစွာ မကောင်းသော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုသည့် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ မှု မရှိသော လူစွမ်းလူစ တုံးသူကို ရှောင်ပါ။
(၂) ရာထူးဂုဏ်သိန် မှေးမှိန်ပြီး ဝန်ထမ်းမည်ကာမျှဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုလျက လာဘ်စားခြင်းဖြင့် လုပ်ငန်းခွင် ပြင်ပမှ မရိုးသားစွာ ငွေရှာသူ၊ လူပွေ လူတေကို ရှောင်ပါ။
(၃) နေ့ရော ညပါ အရက်သေစာ သောက်စားလျက် အရပ်ကို အားမနာ၊ သံသေးသံကြောင် သီချင်းဆိုပြီး မူးရူး ဆူဆဲ၊ ကြက်တိုက်၊ ဖဲရိုက်ခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်ပြီး အလုပ်အကိုင် အတိအကျ မရှိသူကို ရှောင်ပါ။
(၄) အေး၊ ပူ၊ စော၊ မိုးချုပ်၊ ဗိုက်ပြည့်၊ ထမင်းဆာ အကြောင်းမျိုးမျိုး ပြလျက် အလုပ်အကိုင် ကြိုးစားခြင်းမရှိ၊ ကံပေးလျှင် ချမ်းသာမည် ဟူ၍ ကံကိုသာ ရိုးမယ်ဖွဲ့ နေသူကို ရှောင်ပါ။
(၅) ကျောင်းကန် မသွား၊ ရွာမူ ရပ်မူ ဘာမှ မဆောင်ရွက်၊ လူထဲသူထဲ မဝင်၊ တောထဲမှာပျော်၊ အမဲလိုက်၊ ငါးမျှားလျက် အချိန်ပြည့် အချိန်ဖြုန်းနေသူကို ရှောင်ပါ။
သင် အရွေးမမှားပါစေနှင့်၊ သင်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို သင်ရွေးချယ်သော ယောက်ျား၏ အရည်အချင်း အမူအကျင့်တွေနှင့် ပေါင်းပြီး ဆုံးဖြတ်ခံရမှာ ဖြစ်သည်။
သင်တို့ အမျိုးသမီးများကို -
(၅) လိင်ကိစ္စ ခွင့်ပြုချက်
စသည် စိတ်အခြေအနေ ၅-မျိုးသည် လက်ထပ်ဖြစ်ရန် ဖန်တီး လာပါလိမ့်မည်။ ထိုအခါ အထက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို သိရှိ နားလည် လက်ခံ၍ ကိုယ်, စိတ်နှစ်ပါး ချမ်းသာမည့် နေရာတွင် နားခိုကြပါဟု တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။
ကျွန်တော်၏ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေများ အိမ်ထောင်ပြုကြတော့မည်ဆိုလျှင် သိသင့်သည်များကို သိရှိ နားလည်နိုင်ရန် " ဓမ္မဗျူဟာ စာစောင် " ထဲမှ ထုတ်နှုတ် ရေးသားထားပါသည်။ အိမ်ထောင်ပြု ကံ ကောင်းနိုင်ကြပါစေ...
Posted by kyaw at 2:28 AM0comments
လှည်းသားငါးရာ ဇာတ်လာ တရားကို၊
နောက် အကြောင်းမှာ သေချာမယ်။
မင်္ဂလာကို လက်တွေ့ ကျင့်လို့၊
ရှေ့ သို့တစ်ဆင့် တက်ရမယ်။
သည်ပိုး ရွက်ဆောင် ကွယ်။
အဲဒါကြောင့် လူမိုက်ကိုပဲ ဖယ်ခွာလွှဲ၊
(၃၈) ဖြာ မင်္ဂလာတရားတော် များထဲမှ တစ်ခုသာလျှင် ရှိပါသေးသည်..
Posted by kyaw at 11:05 PM0comments
Posted by kyaw at 11:02 PM0comments
သုဘလုလင်၏ လျောက်ထားချက် နှင့် မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားတော်မူချက်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တိုင်း သိသင့်သော အချက်များ ( ၅ - အုပ်တွဲပေါင်းချုပ်) မှ ထုတ်နှုတ် ဖော်ပြထားပါသည်။
(ခ) အချို့ သူတို့မှာ ရောဂါ ကင်းရှင်း ကျန်းမာခြင်း ရှိကြပါသည်။
၃ (က) အချို့ သူတို့မှာ အရုပ်ဆိုး၍၊
(ခ) အချို့ သူတို့မှာ အဆင်းလှကြပါသည်။
၄ (က) အချို့ သူတို့မှာ ဘုန်းတန်ခိုးနည်းပါး၍၊
(ခ) အချို့ သူတို့မှာ ဘုန်းတန်ခိုးကြီးကြပါသည်။
၅ (က) အချို့ သူတို့မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါး၍၊
(ခ) အချို့ သူတို့မှာ ပေါများ ကြွယ်ဝကြပါသည်။
၆ (က) အချို့ သူတို့မှာ အမျိုးယုတ်နိမ့်၍၊
(ခ) အချို့ သူတို့မှာ အမျိုးမြင့်မြတ်ကြပါသည်။
၇ (က) အချို့ သူတို့မှာ ပညာ ဉာဏ်နည်းပါး၍၊
(ခ) အချို့ သူတို့မှာ ပညာ ဉာဏ်များပြားလှပါသည်။
ဤသို့ ကွဲလွဲခြားနားကြခြင်းသည် “ အဘယ် အကြောင်းကြောင့်ပါနည်း “ ဟုလျှောက်ထားလေ၏။
“ သုဘလုလင်… လောက၌ လူများသာမက အလုံးစုံသော သတ္တဝါ ဟူသမျှတို့သည်…၊
၁။ ကံ - သာလျှင် ဥစ္စာ ရှိကြကုန်၏။
၂။ ကံ - သာလျှင် အမွေအနှစ် ရှိကြကုန်၏။
၃။ ကံ - သာလျှင် အဆွေအမျိုး ရှိကြကုန်၏။
၄။ ကံ - သာလျှင် အဆွေခင်ပွန်း ရှိကြကုန်၏။
၅။ ကံ - သာလျှင် ကိုးကွယ်အားထားရာ ရှိကြကုန်၏။
ထို ကံ - တရားသည်ပင်လျှင် သတ္တဝါ ဟူသမျှ တို့ကို အယုတ်၊ အလတ်၊ အမြတ် စသည် ထူးခြားကွဲလွဲအောင် ဆောင်ရွက် ခွဲဝေလေသည် “ ဟု မိန့်တော်မူလေသည်။
အကြောင်း - အကျိုး ဆက်သွယ် ဟောကြားတော်မူချက်
၁ (က) အသက်တိုခြင်း ။ ။ လောက၌ မိန်းမဖြစ်စေ၊ ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ သတ္တဝါတို့အား သနားကြင်နာမှု မရှိသူ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ သတ်ဖြတ်လေ့ရှိ၏။ ထိုသူသည် ထို သတ်ဖြတ်မှု အကုသိုလ် ကံကြောင့် သေသည့် အခြားမဲ့၌ “ ငရဲ “ သို့ ကျရောက်ရာ၏။ ငရဲ၌ မကျရောက်မှု၍ လူဖြစ်လာပြန်လျှင် အသက်တို၏။ သူ့ အသက်ကို သတ်မူ အကုသိုလ်သည် အသက်တိုကြောင်း အကျင့် ဖြစ်၏။
(ခ) အသက်ရှည်ခြင်း ။ ။ အကြင်သူသည် သူ့အသက်ကို သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်၏။ မကောင်းမှုကို ပြုလုပ်ရန် ရှက်ကြောက်၏။ သနားညှာတာမှုရှိ၏။ သတ္တဝါတို့၏ အကျိုးစီးပွား၌ အစဉ် စောင့်ရှောက်လေ့ရှိ၏။ ထိုသူသည် ထိုကောင်းမှု ကုသိုလ်ကံကြောင့် သေသည့် အခြားမဲ့၌ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရ၏။ လူဖြစ်လာပြန်လျှင် အသက်ရှည်၏။ သူ့ အသက်ကို သတ်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည် အသက်ရှည်ကြောင်း အကျင့်ဖြစ်၏။
၂ (က) အနာရောဂါများခြင်း ။ ။ လောက၌ မိန်းမဖြစ်စေ၊ ယောက်ျားဖြစ်စေ (သတ္တဝါ၏ အသက်ကို မသတ်မူ၍) ဆင်းရဲ ဒုက္ခဖြစ်ရုံသာ ဒုတ်၊ ဓါး၊ လက်နက် စသည်ဖြင့် ညှင်းပန်း နှိပ်စက်လေ့ရှိ၏။ ထိုသူသည် ထိုညှင်းပန်းမှု အကုသိုလ်ကြောင့် သေသည့် အခြားမဲ့၌ ငရဲ၌ ကျရောက်ရာ၏။ လူဖြစ်လာပြန်လျှင် အနာရောဂါ များ၏။ သတ္တဝါတို့အား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းသည် အနာရောဂါများကြောင်း အကျင့်ဖြစ်၏။
(ခ) အနာရောဂါ ကင်းရှင်းခြင်း ။ ။ အကြင်သူသည် သနားကြင်နာခြင်းရှိ၏။ ထိုသူသည် ထိုကုသိုလ်ကံကြောင့် သေသည့် အခြားမဲ့၌ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရာ၏။ လူဖြစ်လာပြန်လာလျှင် အနာရောဂါ ကင်း၏။ သတ္တဝါတို့အား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု မရှိခြင်းသည် အနာရောဂါကင်းရှင်းကြောင်း အကျင့်ဖြစ်၏။
၃ (က) အဆင်းမလှခြင်း ။ ။ လောက၌ မိန်းမဖြစ်စေ၊ ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ အမျက်ဒေါသ ထွက်လေ့ရှိ၏။ (သူတစ်ပါး အပေါ်၌) ချုပ်ချယ်လိုမှုများ၏။ မဖြစ်လောက်သော အကြောင်းကို အစွဲပြု၍ အမျက်ထွက်လေ့ရှိ၏။ (အမျက်ထွက်ရမည့် အကြောင်းမဟုတ်ဘဲ လျက်လည်း အမျက်ထွက်လေ့ ရှိ၏) ။ ထိုသူသည် ထိုအကုသိုလ်ကြောင့် သေသည့် အခြားမဲ့၌ ငရဲ၌ ကျရောက်၏။ လူဖြစ်လာပြန်လျှင် အဆင်းလှခြင်းမရှ။ (သတ္တဝါတို့ အပေါ် ၌) အမျက်ဒေါသများခြင်းတို့သည် အဆင်းမလှကြောင်း အကျင့်ဖြစ်၏။
(ခ) အဆင်းလှခြင်း ။ ။ အကြင်သူသည် အမျက်ဒေါသ ထွက်လေ့မရှိ။ ချုပ်ချယ်လိုမှုလည်း မရှိ။ (သာမာန် အကြောင်းမျှကို အစွဲပြု၍ အမျက်ထွက်လေ့မရှိ)။ အမျက်ဒေါသကို သိမ်းဆည်းလေ့ ရှိ၏။ ထိုသူသည် ထိုကုသိုလ်ကံကြောင့် သေသည်၏ အခြားမဲ့၌ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရာ၏။ လူဖြစ်လာပြန်လျှင် အဆင်းလှ၏။ အမျက်ဒေါသ မထွက်ခြင်း စသည်လည်း အဆင်းလှကြောင်း အကျင့်ဖြစ်၏။
၄ (က)ဘုန်းတန်ခိုး နည်းခြင်း ။ ။ လောက၌ မိန်းမဖြစ်စေ၊ ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ သူတစ်ပါးတို့၌ လာဘ်ပေါများခြင်း၊ (သူတစ်ပါးတို့ အရိုအသေ ခံရခြင်း၊ အလေးအမြတ် ခံရခြင်း၊ အပူဇော် - အကန်တော့ ခံရခြင်း တို့၌ ငြူစူစောင်းမြောင်း မှု ဣဿာ ) သဘောထားလေ့ရှိ၏။ ထိုသူသည် ထိုအကုသိုလ်ကံကြောင့် သေသည် အခြားမဲ့၌ ငရဲကျရောက်ရာ၏။ လူဖြစ်လာပြန်လျှင် ဘုန်းတန်ခိုးနည်းပါး၏။ သူတစ်ပါးတို့၏ ပစ္စည်း - ဥစ္စာ လာဘ်ပေါများမှု စသည်၌ ငြူစူစောင်းမြောင်းမှု သဘောထားရှိခြင်းသည် ဘုန်းတန်ခိုးနည်းပါးကြောင်း အကျင့်ဖြစ်၏။
(ခ) ဘုန်းတန်ခိုး ကြီးမားခြင်း ။ ။ အကြင်သူသည် သူတစ်ပါးတို့၌ လာဘ်ပေါများခြင်း၊ ပစ္စည်း - ဥစ္စာပေါများခြင်း၊ အရိုအသေခံရခြင်းတို့၌ ငြူစူစောင်းမြောင်းမှု (ဣဿာ) သဘောမရှိ။ ထိုသူသည် ထိုကုသိုလ်ကြောင့် သေသည့်အခြားမဲ့၌ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရာ၏။ လူဖြစ်လာပြန်လျှင် ဘုန်းတန်ခိုး ကြီးမား၏။ သူတစ်ပါးတို့၏ ပစ္စည်း - ဥစ္စာပေါများမှု စသည်၌ ငြူစူစောင်းမြောင်းမှု မရှိခြင်းသည် ဘုန်းတန်ခိုး ကြီးမားကြောင်း အကျင့်ဖြစ်၏။
၅ (က) ဆင်းရဲ နွမ်းပါးခြင်း ။ ။ လောက၌ မိန်းမဖြစ်စေ၊ ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ ရဟန်း - ပုဏ္ဏားတို့အား ထမင်း - အဖျော်၊ ကျောင်း၊ ဇရပ်၊ အဝတ်သင်္ကန်း၊ ယာဉ် (ဘိနပ်)၊ ပန်း၊ နံ့သာ၊ နံ့သာပြောင်း၊ အိပ်ရာ၊ နေရာ၊ ဆီမီးဟူသော ဒါနဝတ္ထု (၁၀) ပါးတို့ကို ပေးလှူလေ့မရှိ။ ထိုသူသည် ထိုအကုသိုလ်ကံကြောင့် သေသည့်အခြားမဲ့၌ ငရဲ၌ကျရောက်ရာ၏။ လူဖြစ်လာပြန်လျှင် ဆင်းရဲနွမ်းပါး၏။ ထမင်း - အဖျော် စသည့် ဒါနဝတ္ထုတို့ကို မပေးလှူခြင်းသည် ဆင်းရဲ နွမ်းပါးကြောင်း အကျင့်ဖြစ်၏။
(ခ) ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်း ။ ။ အကြင်သူသည် ရဟန်း - ပုဏ္ဏားတို့အား ထမင်း - အဖျော် စသည့် ဒါနဝတ္ထု (၁၀) ပါးတို့ကို ပေးလှူ၏။ ထိုသူသည် ထိုကုသိုလ်ကြောင့် သေသည့်အခြားမဲ့၌ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရာ၏။ လူဖြစ်လာပြန်လျှင် ချမ်းသာကြွယ်ဝ၏။ ထမင်း၊ အဖျော် စသည့် ဒါနဝတ္ထုတို့ကို ပေးလှူခြင်းသည် ချမ်းသာကြွယ်ဝကြောင်း အကျင့်ဖြစ်၏။
၆ (က)အမျိုးယုတ် နိမ့်ခြင်း ။ ။ လောက၌ မိန်းမဖြစ်စေ၊ ယောက်ျားဖြစ်စေ အလွန်မာနကြီး၏။ ရှိခိုးထိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း ရှိမခိုး၊ ခရီးဦးကြိုထိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း ခရီးဦးမကြိုဆို၊ နေရာပေးထိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း နေရာမပေး၊ ခရီးလမ်းဖယ် ပေးထိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း ခရီးလမ်းဖယ်ပေးထိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း ခရီးလမ်းဖယ်မပေး၊ ရိုသေလေးမြတ် - ပူဇော်ထိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း ရိုသေလေးမြတ် - ပူဇော်ခြင်းမရှိ၊ ထိုသူသည် ထိုအကုသိုလ်ကံကြောင့် သေသည့် အခြားမဲ့၌ ငရဲ၌ ကျရောက်ရာ၏။ လူဖြစ်လာပြန်လျှင် အမျိုး (ဇာတ်) ယုတ်နိမ့်ခြင်း၏။ အလွန်မာနကြီးခြင်း ရှိခိုးထိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရှိမခိုးခြင်း စသည်လည်း အမျိုးယုတ်နိမ့်ကြောင်း အကျင့်ဖြစ်၏။
(ခ) အမျိုးမြင့်မြတ်ခြင်း ။ ။ အကြင် သူသည် မာန်မာန မရှိ၊ ရှိခိုးထိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း ရှိခိုး၏။ ခရီးဦးကြိုထိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း ခရီးဦးကြို၏။ နေရာပေးထိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း နေရာပေး၏။ ခရီးလမ်းဖယ်ပေးထိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း ခရီးလမ်းဖယ်ပေး၏။ ရိုသေလေးမြတ် ပူဇော်အပ်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်း ရိုသေလေးမြတ် ပူဇော်ခြင်းရှိ၏။ ထိုသူသည် ထိုကုသိုလ်ကံကြောင့် သေသည့် အခြားမဲ့၌ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရာ၏။ လူဖြစ်လာပြန်လျှင် အမျိုး (ဇာတ်) မြင့်မြတ်၏။ မာန်မာန မရှိခြင်း၊ ရှိခိုးထိုက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရှိခိုးခြင်း စသည်သည် အမျိုးဇာတ် မြင့်မြတ်ကြောင်း အကျင့်ဖြစ်၏။
၇ (က) ဉာဏ်ပညာ နည်းပါးခြင်း ။ ။ လောက၌ မိန်းမဖြစ်စေ၊ ယောက်ျားဖြစ်စေ၊ ရဟန်း - ပုဏ္ဏားတို့သို့ ချဉ်းကပ်၍ --
(၁) ကုသိုလ် အကုသိုလ်တရားကိုလည်းကောင်း၊
(၂) အပြစ်ရှိသောတရား၊ အပြစ်မရှိသောတရား ကိုလည်းကောင်း၊
(၃) မှီဝဲအပ်သောတရား မမှီဝဲအပ်သောတရား ကိုလည်းကောင်း၊
(၄) စီးပွားမဲ့ကြောင်း - ဆင်းရဲကြောင်းတရား၊ စီးပွားဖြစ်ကြောင်း ချမ်းသာကြီးကြောင်း တရားကိုလည်းကောင်း မေးမြန်းလေ့မရှိ။
ထိုသူသည် (ထိုသို့ မေးမြန်းမှု မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သော) အကုသိုလ်ကံကြောင့် သေသည့် အခြားမဲ့၌ ငရဲ၌ ကျရောက်ရာ၏။ လူဖြစ်လာပြန်လျှင် ဉာဏ်ပညာ နည်းပါး၏။ ရဟန်း - ပုဏ္ဏားတို့သို့ ချဉ်းကပ်၍ မေးမြန်းမှု မရှိခြင်း စသည်သည် ဉာဏ်ပညာနည်းပါးကြောင်း အကျင့်ဖြစ်၏။
(ခ) ဉာဏ်ပညာ ကြီးခြင်း ။ ။ အကြင်သူသည် ရဟန်း - ပုဏ္ဏားတို့အား ချဉ်းကပ်၍ --
(၄) စီးပွားမဲ့ကြောင်း - ဆင်းရဲကြောင်းတရား၊ စီးပွားဖြစ်ကြောင်း ချမ်းသာကြီးကြောင်း တရားကိုလည်းကောင်း မေးမြန်းလေ့ရှိ၏။
ထိုသူသည် ထိုသို့ မေးမြန်းမှုကြောင့် ရရှိအပ်သော ကုသိုလ်ကံကြောင့် သေသည့် အခြားမဲ့၌ နတ်ပြည်သို့ ရောက်ရာ၏။ လူဖြစ်လာပြန်လျှင် ဉာဏ်ပညာကြီးမား၏။ ရဟန်း - ပုဏ္ဏားတို့သို့ ချဉ်းကပ်၍ မေးမြန်းမှု စသည်သည် ဉာဏ်ပညာကြီးမားကြောင်း အကျင့်ဖြစ်၏။
ဤစာကို ဖတ်၍ ကျွန်ုပ်၏ မိတ်ဆွေများ အကျိုးများစွာ ရရှိနိုင်ကြပါစေ....
Posted by kyaw at 4:03 AM0comments
၁။ လူမိုက်ကို ရှောင်ကြဉ်ရမည်။
၂။ ပညာရှိသောသူကို မှီဝဲဆည်းကပ်ရပါမည်။
၃။ ပူဇော်ထိုက်သောသူကို ပူဇော်ရပါမည်။
၄။ သင့်တင့်လျှောက်ပတ်သော အရပ်၌ နေရပါမည်။
၅။ ရှေးကပြုခဲ့သော ကောင်းမှု ရှိရပါမည်။
၆။ မကောင်းမှုကို မပြုမိအောင် မိမိကိုယ်ကို ကောင်းစွာ စောင့်ရှောက်ရပါမည်။
၈။ အပြစ်မရှိသောအတတ်ကို တတ်ရပါမည်။
၉။ လူ့ ဝိနည်း၊ ရဟန်းဝိနည်း တရားတော်ကို ကောင်းစွာ သင် - အံ လေ့ကျင့်ရပါမည်။
၁၀။ တရားလမ်းကြောင်းသင့်၍ ကောင်းမြတ်သော စကားကို ဆိုရပါမည်။
၁၁။ အမိ - အဘ တို့ကို လုပ်ကျွေးမွေးမြူရပါမည်။
၁၂။ သားမယား တို့ကို သင်္ဂြိုဟ် ထောက်ပံ့ရပါမည်။
၁၃။ အကုသိုလ် အနှောင့်အယှက် မရှိသော အလုပ်ကို လုပ်၍ အသက်မွေးရပါမည်။
၁၄။ နိဗ္ဗာန်ကို တောင့်တ၍ အလှူပေးရပါမည်။
၁၅။ တရားနှင့် လျှော်သော အကျင့်ကို ကျင့်ရပါမည်။
၁၆။ အဆွေ - အမျိုးတို့အား အကျင့်ကို ကျင့်ရပါမည်။
၁၇။ လောက၌ အပြစ်မရှိ၊ သံသရာ၌လည်း အပြစ်မရှိသော အမှုကို ပြုရပါမည်။
၁၈။ မကောင်းမှုမှ ဝေးစွာရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။
၁၉။ အကောင်းမှုမှ ကိုယ်၊ နှုတ်၊ နှလုံး သုံးပါးဖြင့် အထူးရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။
၂၀။ မူးယစ်စေတတ်သော သေရည် - သေရက်ကို သောက်စားခြင်းမှ ရှူရှိုက်ခြင်းမှ ကောင်းစွာ ရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။
၂၁။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌ မမေ့မလျှော့ ရပါ။
၂၂။ ရိုသေထိုက်သောသူကို ရိုသေရပါမည်။
၂၃။ မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချရပါမည်။
၂၄။ ရသမျှ ပစ္စည်း - ဥစ္စာနှင့် ရောင့်ရဲ တင်းတိမ်ရပါမည်။
၂၅။ သူတစ်ထူး၏ ကျေးဇူးကို သိရပါမည်။
၂၆။ သင့်တင့် လျှောက်ပတ်သော အခါ၌ တရားတော်ကို နာယူရပါမည်။
၂၈။ သူတော်ကောင်းတို့ ဆိုဆုံးမသော စကားကို ကောင်းစွာ နာယူရပါမည်။
၂၉။ ရဟန်း၊ သံဃာတို့ကို ရိုသေလေးမြတ်စွာ ဖူးမြင်ရပါမည်။
၃၀။ သင့်တင့် လျှောက်ပတ်သော အခါ၌ တရားတော်ကို ဆွေးနွေးမေးမြန်းရပါမည်။
၃၁။ မကောင်းမှုကို မပြုမိအောင် ခြိုးခြံစွာ ကျင့်ရပါမည်။
၃၂။ မေထုန်အကျင့်မှ ကင်းသော မြတ်သောအကျင့်ကို ကျင့်ရပါမည်။
၃၃။ သစ္စာလေးပါးတရားကို ကောင်းစွာသိမြင်ရပါမည်။
၃၄။ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို မျက်မှောက်ပြုရပါမည်။
၃၅။ လောကဓံတရားရှစ်ပါးနှင့် တွေ့ကြုံသော်လည်း တုန်လှုပ်ခြင်းမဖြစ်အောင် မိမိစိတ်ကို ထိန်းရပါမည်။
၃၆။ စိုးရိမ်ခြင်း မဖြစ်အောင် စိတ်ကိုထိန်းရပါမည်။
၃၇။ လောဘ - ဒေါသ - မောဟ ဟူသ၍ မြူမျှမရှိစေရပါ။
၃၈။ ကြောက်ခြင်းဟူသော ဘေးလည်း မရှိစေရပါ။
Posted by kyaw at 1:26 AM0comments
ဆရာကြီး ဦးရွှေအောင် ရေးသားသော " ဘဝအကျဉ်းသား " စာအုပ်မှ ရေးသား ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
“ စာပေဟူသည် ခေတ်တစ်ခေတ်၏ ကြေးမုံ ဖြစ်သည်။ “ ထိုကဲ့သို့ အဆို ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီတော့ စာပေထဲမှာ ခေတ်၏ သဘော ပါဝင်တယ်လို့ အဓိပ္ပာယ် ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ လက်ဆင့်ကမ်း ပညာအသိအရ စာဖတ်နည်းကို ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
စာဖတ်နည်းကို SIMAC လို့ အတိုကောက် ဆိုကြပါသည်။ အဲဒီထဲက S ဆိုတာကတော့ “ Situation “ = ခေတ်၏ အခြေအနေ လို့ အကြမ်းဖျင်း အနက် ရပါတယ်။ I ဆိုတာကတော့ “ Intention “ = စာရေးသူ၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ စာရေးသူ၏ စေတနာ ပင်ဖြစ်ပါသည်။ M ဆိုတာကတော့ ” Matter ”= အကြောင်းအရာ ဟုဆိုလိုပါတယ်။ A ဆိုတာကတော့ “ Approach “ = ချည်းကပ်နည်း ဟုဆိုသည်။ ယခုခေတ် အနေနဲ့ “ ဇောင်း “ ပေးခြင်းလို့ ဆိုသည်။ C ဆိုတာကတော့ ” Consistency “= အကြောင်းအကျိုး သို့မဟုတ် ရှေ့ နှင့်နောက် ဆီလျော်ခြင်း သို့မဟုတ် ညီညွတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဲဒီတော့ စာတစ်ပုဒ်ကို ဖတ်ရင်ဖြစ်စေ၊ ရေးရင်ဖြစ်စေ ဒီအင်္ဂါ (၅) ချက်ကို တွေ့အောင် ရှာရတယ်။ ဒီအင်္ဂါ (၅) ချက်ကလည်း ပေါ်ထင်ကြီးတော့ ရှိမနေရဘူး။ ပေါ်ထင်ကြီး ရှိနေပြန်ရင်လည်း ဒေါသသင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရှိတော့ ရှိရမယ်၊ သွယ်သွယ်ဝိုက်ဝိုက် ရှိရမယ်။ ဒါမှ ဂုဏ်ရောက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ ၅ ချက်ထဲမှာ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ ချဉ်းကပ်နည်းပဲ ဖြစ်တယ်။
ပစ္စုပ္ပန်မှာ မြင်ရ၊ ကြားရ၊ သိရတဲ့ အာရုံများကို ပြောကြတဲ့ နေရာမှာ ချဉ်းကပ်မှု သို့မဟုတ် ဇောင်းပေးမှု ကို လိုက်ပြီး ဝါဒအမျိုးမျိုး ဖြစ်ပေါ်လာကြပါတယ်။ ဥပမာ - This (ဒီဟာ) ကို လောကီရေးအရ ပြောပြော၊ လောကုတ္တရာအရ ပြောပြော၊ ဘယ်သူကပဲ ပြောပြော (ဒီဟာ) လို့ပဲ ပြောကြတာပဲ။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် အနုလောမနည်းနဲ့ ချဉ်းကပ်တော့ ဒုက္ခပွားစီးရေးကို မြင်ရပါတယ်။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ပဋိလောမနည်းနဲ့ ချဉ်းကပ်တော့ ဒုက္ခ ချုပ်ငြိမ်းရေးကို မြင်ရပါတယ်။ ဒုက္ခ ပွားစီးရေးအတွက် ဇောင်းပေးခြင်းကို “ မိစ္ဆာပဋိပဒါ “ လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒုက္ခ ချုပ်ငြိမ်းရေးအတွက် ဇောင်းပေးခြင်းကို ” သမ္မာပဋိပဒါ ” လို့ဆိုပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် စာဖတ်ကြတယ် ဆိုတဲ့နေရာမှာ စာဖတ်တတ်နိုင်ကြပါစေ။
Posted by kyaw at 8:58 PM0comments
၁။ ဘုရင်သုဒ္ဓေါဒန (ဘုရားရှင်၏ ခမည်းတော်)
၂။ မဟာမာယာ (ဘုရားရှင်၏ မယ်တော်)
၃။ သိဒ္ဓတ္ထ (ဘုရားရှင်၏ ငယ်နာမည်)
၄။ ဂေါတမဘုရားရှင် (ဘုရားရှင်၏ ဘွဲ့နာမည်တော်)
၅။ မဟာသက္ကရာဇ် ၆၇-ခု၊ ဝါဆိုလပြည့်၊ ကြာသပတေးနေ့ (ဘီစီ-၆ ရာစု၊ သန္ဓေယူ)
၆။ မဟာသက္ကရာဇ် ၆၈-ခု၊ ကဆုန်လပြည့်၊ သောကြာနေ့ (ဘီစီ-၆ ရာစု၊ မွေးဖွား)
၇။ လုမ္ဗိနီဥယျာဉ်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ (ယနေ့ခေတ်-နီပေါနိုင်ငံ) (မွေးဖွားသည့်နေရာ)
၈။ ယသောဓရာ(ယသော်ဓရာ) (ဘုရားမဖြစ်မီ ဘုရားရှင်၏ ဇနီး)
၉။ ၁၆-နှစ် အရွယ် (လက်ထပ်သည့် အသက်အရွယ်)
၁၀။ ရာဟုလာ (ဘုရားမဖြစ်မီ ဘုရားရှင်၏ သားတော်)
၁၁။ ၂၉-နှစ် အရွယ် (ရဟန်းအဖြစ်ဖြင့် စတင် တရားရှာသည့် အရွယ်)
၁၂။ မဟာသက္ကရာဇ် ၉၇-ခု၊ ဝါဆိုလပြည့်၊ တနင်္လာနေ့ (တောထွက်သည့်နေ့)
၁၃။ ၆-နှစ်ကြာ (ဒုက္ကရစရိယ-ခက်ခဲသည့် အကျင့်တရား ရှာဖွေရင်း တရားအားထုတ်သည့် ကာလ)
၁၄။ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃-ခု၊ ကဆုန်လပြည့်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ (ဘုရားဖြစ်သည့် နေ့)
၁၅။ ၃၅-နှစ် အရွယ်တွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဗီဟာပြည်နယ်၊ ဂယာမြို့ (ဗုဒ္ဓဂါယာ) (ဘုရားဖြစ်တော်မူ၏)
၁၆။ ဘုရားဖြစ်သည့် ဗောဓိပင် (ညောင်ဗုဒ္ဓဟေပင်)
၁၇။ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃-ခု၊ ဝါဆိုလပြည့်၊ စနေနေ့ (အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဗာရာဏသီတွင် ဓမ္မစင်္ကြာတရားကိုဟောတော်မူ၏)
၁၈။ တရားဦးနာရသူငါးဦး (အရှင်ကောဏ္ဍည၊ အရှင်ဓမ္မ၊ အရှင်ဘဒ္ဒိယ၊ အရှင်မဟာနာမ၊ အရှင်အသာဇိ)
၁၉။ ၄၅-နှစ်အကြာ (လူ၊ နတ်၊ ဗြဟ္မာ၊ သတ္တဝါတို့အား တရားဟောကြား၍ လောကအကျိုးဆောင်တော်မူ၏)
၂၀။ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈-ခု၊ ကဆုန်လပြည့်၊ အင်္ဂါနေ့တွင် (သက်တော်(၈၀) အရွယ်၌)
(အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကုသိနာရုံမြို့ တွင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူ၏)
၂၁။ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈-ခု၊ ကဆုန်လပြည့်ကျော်၊ (၁၂) ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွင်
(ဘုရားရှင်၏ အလောင်းတော်ကို တေဇောဓာတ် သင့်လောင်တော်မူ၏)
၂၂။ ဒီပင်္ကရာဘုရားရှင် (ဘုရားစင်စစ် ဧကန်ဖြစ်မည်ဟု ဗျာဒိတ်စကား မွတ်ကြားသည့် ဘုရားရှင်)
၂၃။ လေးအသင်္ချေ နှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း (ဘုရားဖြစ်ရန် ဖြည့်ကျင့်ရသော နှစ်အရေအတွက်)
၂၄။ ပညာဓိက ဘုရားရှင် (ပညာဓိက သဒ္ဒါဓိက ဝီရိယာဓိက ဘုရား သုံးမျိုးရှိ၏)
၂၅။ အရှင်သာရိပုတ္တရာထေရ် (ပညာအရာ ဧတဒဂ်ရ၊ လက်ျာတော်ရံ အဂ္ဂသာဝက)
၂၆။ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလန်ထေရ် (တန်ခိုးအရာ ဧတဒဂ်ရ၊ လက်ဝဲတော်ရံ အဂ္ဂသာဝက)
၂၇။ အရှင်ခေမာထေရ် (ပညာအရာ ဧတဒဂ်ရ၊ လက်ျာတော်ရံ အမျိုးသမီး အဂ္ဂသာဝိကာ)
၂၈။ အရှင်ဥပ္ပလဝဏ်ထေရ် (တန်ခိုးအရာ ဧတဒဂ်ရ၊ လက်ဝဲတော်ရံ အဂ္ဂသာဝိကာ)
၂၉။ အရှင်အာနန္ဒာထေရ် (ဥပဌာက - အနီးကပ်ပြုစုလုပ်ကျွေးသူ၊ ဘုရားရှင်နှင့် ညီဝမ်းကွဲတော်၏)
၃၀။ ဘုရားရှင် နှင့် စပ်လျဉ်း၍ အရေးကြီးသော (၇) နေ့
(မ- သိ - ကြ - လျင် - တွေး - ဆ- ဦး ------ ဗုဒ္ဓ နေ့မြတ်ထူး )
(သန် - ဖွား - တော - ပွင့် - စက် - စု - သင့် --------- ရှင်ပင့် နေ့မြတ်ထူး )
မ = ကြာသပတေး ၊ သိ = သောကြာ၊ ကြ = တနင်္လာ၊ လျင် = ဗုဒ္ဓဟူး၊ တွေး = စနေ၊ ဆ = အင်္ဂါ၊ ဦး = တနင်္ဂနွေနေ့
Posted by kyaw at 4:18 AM0comments
၃၃။ သူတော်ကောင်းတို့ကိုသာ ပေါင်းဖော်ရာ၏။
သူတော်ကောင်း တရားကို သိရ၍ မြင့်မြတ်၏။
၃၄။ သူယုတ်မာတို့နှင့် ပေါင်းဖက်ခြင်းကို စွန့်လွှတ်လော့၊
သူတော်ကောင်း ပေါင်းဖက်အပ်သူကိုသာ ဆည်းကပ်လော့၊
မမြဲသောအဖြစ် (သင်္ခါရတရား) ကို အစဉ်အမြဲအောက်မေ့ဆင်ခြင်လော့။
၃၅။ သူယုတ်မာတို့သည် ရေသဖန်းသီးမှည့်နှင့်တူ၏။ အပြင်ပန်းအားဖြင့် အဆင်းရှိသော်လည်း အတွင်း၌မူကား ပိုးလောက်များဖြင့်သာ ပြည့်ကုန်၏။
၃၆။ ပိန္နဲသီးမှည့်တို့သည် ပြင်ပ၌ ဆူးများရှိသော်လည်း အတွင်းအရသာမူကား ချိုမြိန်လှပေ၏။
သူတော်ကောင်းတို့၏ စိတ်နှလုံးသည်လည်း ထို့အတူပင် ဖြစ်၏။
၃၇။ စန္ဒကူးပင်သည် သွေ့ခြောက်သွားသည့်တိုင် မွှေးရနံ့ကို မစွန့်။
ဆင်ပြောင်သည် စစ်မြေပြင်သို့ ရောက်သော်လည်း ခံ့ထည်တင့်တယ်ခြင်းကို မစွန့်။
ကြံသည် ကြိတ်စက်သို့သို့ ရောက်သော်လည်း ချိုသော အရသာကို မစွန့်။
ပညာရှိ သူတော်ကောင်းသည် ဘေးဒုက္ခဆင်းရဲသို့ ကျရောက်ငြားသော်လည်း သူတော်ကောင်းတရားကို မစွန့်။
၃၈။ ခြင်္သေ့တို့ မည်သည် ငတ်မွတ်ဆာလောင်သော်လည်း မြက်သစ်ရွက်ကိုမူ မစား။
ပညာရှိ သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်း ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရသော်လည်း မကောင်းမှုဒုစရိုက်ကို လက်မခံ အကျင့်သီလကို စောင့်ထိန်းကြကုန်၏။
၃၉။ မြင့်မြတ်သောမျိုးနွယ်ကို စောင့်သူသည် ဆင်းရဲခြင်းသို့ ရောက်သော်လည်း ယုတ်ညံ့သော အမှုကိုမပြု။
၄၀။ စန္ဒကူးနံ့သာသည် ချမ်းမြေ့၏။
ထို့ထက် လရောင်ကပို၍ ချမ်းမြေ့၏။
စန္ဒကူးနှင့် လရောင်တို့ချမ်းမြေ့သည်ထက် ကောင်းစွာဆိုအပ်သော သူတော်ကောင်းစကားက ပို၍ ချမ်းမြေ့၏။
၄၁။ အနောက်က နေထွက်ရာ၏။
သူတော်ကောင်း စကားသည်ကား တစ်ရံတစ်ဆစ်မျှ မဖောက်ပြန်ရာ။
၄၂။ သစ်ပင်၏ အရိပ်သည် အေးချမ်း၏။
ထိုထက် ဆွေမျိုးမိဘအရိပ်က ပို၍အေးချမ်း။
ထိုထက် ဆရာသမားအရိပ်က ပို၍ အေးချမ်း၏။
ထိုထက် မြတ်စွာဘုရားအရိပ်က အဆများစွာသာလွန် အေးချမ်း၏။
၄၃။ ပျားပိတုန်းတို့သည် ပန်းကို အလိုရှိကုန်၏။
သူတော်ကောင်းတို့သည် ဂုဏ်ကျေးဇူးကို အလိုရှိကုန်၏။
ယင်ကောင်တို့သည် အပုပ်ကို အလိုရှိကုန်၏။
သူယုတ်တို့သည် အမျက်ဒေါသကို အလိုရှိကုန်၏။
၄၄။ အမိအဘတို့၏ အဆုံးအမကို မရမူ ကိုယ်နှုတ်အမူအရာ ကြမ်းတမ်း၏။
အမိအဘတို့၏ အဆုံးအမကို ကောင်းစွာရမူ ကိုယ်နှုတ် အမူအရာ လိမ္မာ ယဉ်ကျေး၏။
၄၅။ စစ်မြေပြင်အရပ်၌ ရဲရင့်သောသူကို အလိုရှိ၏။
လျှို့ဝှက်သောကိစ္စ၌ နှုတ်လုံသူကို အလိုရှိ၏။
စားကောင်းသောက်ဖွယ် စားသောက်ရချိန်၌ ချစ်ခင်သူကို အလိုရှိ၏။
ခက်ခဲနက်နဲသော အရေးကိစ္စကြုံတွေ့ရချိန်၌ ပညာရှိကို အလိုရှိ၏။
၄၆။ သူယုတ်မာသည် သူတော်ကောင်းကို တွေ့မြင်လျှင် ချုပ်ချယ် ညှဉ်းဆဲခြင်းကိုပြုလို၏။
၄၇။ အမှုကိစ္စဟူသမျှကို အလျင်စလို မပြုရာ၊ အလျင်စလိုပြုခဲ့သော် နောင်မှ ပူပန်ရတတ်၏။
၄၈။ အမျက်ဒေါသကို ဖြေဖျောက်နိုင်လျှင် စိုးရိမ်ခြင်း ကင်းရ၏။
သူ့ကျေးဇူးကို ဆိုတတ်လျှင် သူတော်ကောင်းတို့ ချီးမွမ်းကုန်၏။
ကြမ်းကြုတ်သော စကားကို သည်းခံခြင်းသည် မြတ်၏။
၄၉။ ကျဉ်းမြောင်း၍ မစင်အတိပြီးသောနေရာ၌ နေရခြင်းသည် ဆင်းရဲ၏။
ထိုထက် မချစ်မနှစ်သက်သောသူနှင့် အတူတကွ နေရခြင်းသည် ပို၍ ဆင်းရဲ၏။
ထိုထက် သူ့ကျေးဇူးကို မသိတတ်သူနှင့် နေရခြင်းက ပို၍ ဆင်းရဲ၏။
၅၀။ ဆုံးမသင့်သည်ကို အမြဲဆိုဆုံးမရာ၏။
ထိုသို့ဆုံးမ တားမြစ်တတ်သူကို သူတော်ကောင်းတို့ နှစ်သက်လိုလားကြ၏။ သူယုတ်မာတို့ကား မနှစ်သက်ကြချေ။
၅၁။ မိမိထက် မြတ်သောသူကို မိမိကိုယ်ကို နှိမ့်ချခြင်းဖြင့် လည်းကောင်း၊
မိမိနှင့်တန်းတူသူကို မိမိက လုံ့လပြုအားထုတ်ခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း အောင်မြင်ရာ၏။
၅၂။ သံဃာပိုင် (သံဃိက) ပစ္စည်းကို အလွဲသုံးစားပြုခြင်းသည် အဆိပ်ကိုသောက်သုံးခြင်းထက် ဆိုး၏။
အဆိပ်သည် တစ်ကြိမ်တစ်သက်ကိုသာ သတ်သော်လည်း သံဃာ့ပစ္စည်းကို အလွဲသုံးစားပြုမှားမူ ဘဝ အဆက်ဆက် ပျက်စီးရချေ၏။
၅၃။ လျင်မြန်ခြင်းဖြင့် မြင်း၏ ကျေးဇူးကို သိရာ၏။
ဝန်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နွား၏ ကျေးဇူးကို သိရာ၏။
နို့ရည်ရသဖြင့် နွားမ၏ ကျေးဇူးကိုသိရာ၏။
ကြံစည်လျှို့ဝှက်ရာအမှုကိစ္စ တို့၌ ဖြေကြားပြောဆိုနိုင်ခြင်းဖြင့် ပညာရှိ၏ ကျေးဇူးကိုသိရာ၏။
၅၄။ သူတော်ကောင်းတို့၏ ဥစ္စာသည် နည်းပင်နည်းငြားသော်လည်း တွင်းမှထွက်သောရေချိုကဲ့သို့ သူတစ်ပါးတို့ သောက်သုံးမှီခိုရ၏။
မသူတော်တို့၏ ဥစ္စာသည် များပင်များငြားသော်လည်း သမုဒ္ဒရာရေကဲ့သို့ သောက်ချိုး မှီခိုရာမရနိုင်။
၅၅။ မြစ်တို့သည် ရေကို မသောက်ကုန်။
သစ်ပင်တို့သည် အသီးကို မစားကုန်။
သူတော်ကောင်းတို့၏ ဥစ္စာသည်လည်း သူတစ်ပါးတို့၏ အကျိုးအတွက်သာ ဖြစ်၏။
၅၆။ မတောင့်တအပ်သည်ကို မတောင့်တရာ။
အချိန်ကို အချည်းနှီး အလဟဿ မကုန်ဆုံးစေရာ။
၅၇။ မကြံစည်ဘဲလျက်လည်း ဖြစ်တတ်၏။
ဥစ္စာစည်းစိမ်ဟူသည် ကြံစည်ကြိုးစားတိုင်း မရနိုင်။
၅၈။ သူယုတ်မာအား ချစ်ခြင်း၊
သူယုတ်မာတို့၏ တရား၌ နှစ်လိုခြင်း၊
ဤသည်တို့ကား ပျက်စီးမည့် အကြောင်းတည်း။
=========== သုဇနကဏ္ဍပြီး၏။ ===========
Posted by kyaw at 2:48 AM0comments
ဆရာတော် ဦးဇောတိက (မဟာမြိုင်တောရ) ရေးသားသော စာအုပ်မှ ထုတ်နှုတ် တင်ပြအပ် ပါသည်။
သိပ်ပြီး ဘန်းစကား ဆန်တဲ့ စကားကို မပြောပါနဲ့ ၊ ကိုယ့် Personality ကို ပျက်စီးစေတယ် ။ သိပ်ပြီး ခေတ်ဆန်လွန်း ၊ ကလက်လွန်းတဲ့ မသပ်မရပ်ဖြစ်နေတဲ့ အ၀တ်အစားကို မ၀တ်ပါနဲ့ ၊ ကိုယ့်ရဲ့Personality ကို ထိခိုက်ပါတယ် ။
Personality isagrem in the child that can develop only by slow stages inatrue life.
Personality ဟာ ကလေးရဲ့စိတ်ထဲမှာ အစေ့အညှောက် အလေးတစ်ခု အနေနဲ့ရှိပြီးသားပါ။ ဒါလေးကို တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာအောင် ပြုစုရတာ။
အဖက်ဖက်က အရည်အသွေးတွေ ကောင်းလာဖို့ ဆိုတာ ငယ်စဉ်ကတည်းက တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ပြုစုကပျိုးထောင်သွားရတယ်။ ဗြုန်းခနဲ ချက်ချင်းကြီးတော့ မရနိုင်ဘူး။ ဘ၀ထဲမှာ ဖြတ်သန်းသွားရင်းနဲ့ဘ၀ကို နေသွားရင်းနဲ့လေ့ကျင့်ပြုစုပျိုးထောင် ယူရတာ။ မွေးခါစကလေးအတွက် လူ့ အရည်အချင်းတွေဟာ အညှောက်လေးလောက်ပဲ ရှိတယ်။
Personality ဆိုတာ ပုံသေမရှိဘူး။ သူ့ အပေါ် အများက ဆက်ဆံပုံ၊ သဘောထားပုံ အပေါ်မှာ အများကြီးမူတည်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းအခြေအနေ ပေါ်မှာ မူတည်သလို ပြုစုထိန်းကျောင်းပေးတဲ့ သူက ပြုစုတတ်ရင် ကောင်းသထက် ကောင်းသွားမယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ ဆိုးနေသည့်တိုင် ကိုယ်ကိုတိုင်က အသိ ဥာဏ်ရှိခဲ့ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းပြီး ကောင်းအောင် ကြိုးစားရင် ကောင်းလာနိုင်တယ်။
တခြားတစ်ယောက်မှာ ရှိတဲ့ ကောင်းကွက်လေးတွေကို တကယ် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ တန်ဖိုးထားမယ်၊ မြတ်နိုးမယ်၊ အသိအမှတ်ပြုမယ် ဆိုရင် အဲဒီအရည်အချင်းမျိုး ကိုယ့်မှာလည်း ဖြစ်လာမယ်။
The achievement of personality means nothing less than the best possible development of all that lie in the particular single being.
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး အကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့ ဆိုတာ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အလားအလာရှိသမျှကို အကောင်းဆုံးပေါ်ထွက်လာအောင် လုပ်လိုက်တာပါ ပဲ။
The development of personality means fidelity to the law of one’s being.
ကိုယ့်ရဲ့ Personality တိုးတက်ဖွုံဖြိုးအောင် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားတာဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သစ္စာရှိတာပဲ။
အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် လုပ်ချင်ရင် ကိုယ်နဲ့ အကိုက်ညီဆုံး ကို လုပ်မှ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ ကိုယ်နဲ့အကိုက်ညီဆုံးကို မလုပ်ဘဲနဲ့သူများအထင်ကြီးအောင် လုပ်ရင် အကောင်းဆုံး ဖြစ်ဖို့ ရာ မလွယ်တော့ဘူး။
ကိုယ့်ဘ၀မှာ ကိုယ်တကယ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်၊ မြင့်မြတ်တဲ့ အလုပ်၊ ကိုယ့်ဝါသနာ စရိုက်ပါရမီနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ လူ့ သဘာဝမှာ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အခြေခံပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဆန္ဒကို အကောင်အထည်ဖော်ရတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်တဲ့သူဟာ အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ ဘယ်သူမှ မသိကြလည်း အောင်မြင်တဲ့သူပဲ။
အောင်မြင်မှုဆိုတာ မှန်ကန်တဲ့ သဘောထားပါ။ စိတ်ဓာတ်အရည်အသွေး ပြည့်ဝသူတွေသာ ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်။
ရွေးချယ်မှု နှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး
Personality can never develop itself unless the individual chooses his own way consciously and with conscious moral decision.
ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သိပြီး ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်မှု မရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ရည်ကိုယ်သွေး မဖွံ့ ဖြိုးနိုင်ပါဘူး။
သူများနောက်ကို မလိုက်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ကိုယ် ကိုယ့်လမ်းကို ကိုယ်ရွေးတဲ့သူဟာ အကြီးမားဆုံးသတ္တိ ရှိတဲ့သူပဲ။
ချီးမွမ်းတယ်၊ ကဲ့ရဲ့ တယ်ဆိုတာ သူတစ်ပါးစိတ်ထဲမှာ ခဏလေးဖြစ်သွားတဲ့ အတွေးလေးတစ်ခုပါ။
Man’s happiness is to move higher, to develop his highest faculty, to gain knowledge of the higher and highest thing.
လူရဲ့ တကယ်စစ်မှန်တဲ့ ပျော်ရွင်မှုဟာ မြင့်မြတ်တဲ့ဘက်ကို သွားနေမှ၊ ကိုယ့်ရဲ့ အကောင်းဆုံး ဂုဏ်အရည်အချင်းတွေ အမြင့်ဆုံးရောက်အောင် အကောင်အထည်ဖော်နေမှ၊ တစ်နေ့ တခြား ပိုပြီး မြင့်မြတ်တာကို သိဖို့ နောက်ဆုံးအဆင့်အမြင့်ဆုံးထိ သိမှပဲ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။
If he moves lower, develops only his lower faculty which helps the animal nature then he makes himself deeply unhappy.
ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ နိမ့်ကျတဲ့အရည်အသွေးတွေကိုပဲ မွေးမြူနေမယ်၊ နိမ့်တဲ့ဘက်ကို ပဲ သွားမယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့တိရစ္ဆာန်သဘာဝတွေကိုပဲ ဖြစ်အောင် အားပေးနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကြီးအကျယ် စိတ်ဆင်းရဲအောင် လုပ်နေတာပဲ။
သင် ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာ သိချင်ရင်…..
သင် ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာ သိချင်ရင် သင်နဲ့ သင့် ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးကို အကဲ ခတ်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးဟာ ကိုယ့်ရဲ့ Personality ကို ဖော်ပြနေတယ်။
သူများကို အနိုင်ယူချင်တဲ့ စိတ်ဟာ ခလေးဆန်တဲ့ စိတ်ဖြစ်တယ်။ သူများကို အပြစ်ရှာချင်တဲ့ စိတ်ထားဟာ မရင့်ကျက်တဲ့ စိတ်ထားဖြစ်တယ်။
မိဘ၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး နှင့် သားသမီး
Personality ကောင်းတဲ့ သူဟာ အိမ်ထောင်ကျရင်လည်း အိမ်ထောင်ဖက်အပေါ် သဘောထားမှန်တယ်။ လွတ်လပ်ခွင့် ပေးတယ်။ လေးစားမှု ရှိတယ်။ စစ်မှန်ပြီး ရိုးသားပွင့်လင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေး ရှိတယ်။ အိမ်ထောင်ဖက် နှစ်ယောက်လုံး Personality ကောင်းရင်တော့ အင်မတန် သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးဖြစ်ပြီး တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အပြန်အလှန် အကျိုးပြုမယ်။
သားသမီး ရလာတဲ့အခါမှာလည်း သားသမီးအပေါ် မှန်ကန်တဲ့ စိတ်နဲ့ချစ်တတ်တယ်။ သားသမီးရဲ့အရည်အချင်းတွေ အမြင့်မားဆုံးထွက်အောင် အထောက်အကူပေးနိုင်တယ်။
မိဘတွေရဲ့Personality ဟာ သားသမီးတွေအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု အများကြီးရှိတယ်။
ဘယ်လို အရည်အသွေးရှိတဲ့ သားသမီးတွေ ဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာ မိဘတွေရဲ့Personality ပေါ်မှာ အများကြီးမူတည်တယ်။
မာန်မာန နှင့် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး
လူအများနဲ့ဆက်ဆံရေးမှာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေ၊ အကျင့်စရိုက်တွေကို နိမ့်ကျသွားစေတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုက ကိုယ့်ရဲ့မာန်မာန ပါပဲ။
မာန်မာနဆိုတာ အင်မတန် ခက်ခဲနက်နဲသိမ်မွေ့ တဲ့ ကိလေသာ ဖြစ်တယ်။ ဒီလို Psychic inflation (စိတ်ဖောင်းပွမှု) ဖြစ်သွားရင် စိတ်ကြီးဝင်တယ်၊ ကိုယ်လုပ်သမျှ မှန်တယ်လို့ ထင်တယ်။ ကိုယ်ပြောသမျှ မှန်တယ်လို့ထင်တယ်။ ကိုယ့်ကို ပြန်ပြီးတော့ လွဲမှားမှု ကို ပြောရင် လုံးဝလက်မခံချင်ဘူး။ သည်းမခံချင်ဘူး။ စိတ်ဆိုးတတ်တယ်။ ပြင်းထန်စွာ တုံ့ ပြန်တတ်တယ်။
ပစ္စည်း ဥစ္စာ၊ ရာထူး အမြင့်ဆုံး ကို ရောက်လာပြီဆိုရင် Psychic inflation လို့ ခေါ်တဲ့ စိတ်ကြီးဝင်တာ၊ ဘ၀င်မြင့်တာ၊ မာနကြီးတာ တွေဟာ ဖြစ်လာတယ်။ သူများနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ အခါမှာ မတူဘူး၊ မတန်ဘူး ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့အထက်စီးကနေ တင်စီးပြီးတော့ one up (တစ်ဆင့်မြှင့်) သဘောထားမျိုးနဲ့ ဆက်ဆံတယ်။ သူများကိုတော့ အောက်နှိမ့်ချပြီး one down (တစ်ဆင့်နှိမ့်) နေရာမှာ ထားတယ်။
ကိုယ့်ဘ၀ဟာ ကိုယ့်စိတ်ရဲ့ရောင်ပြန်ဟပ်မှု
If u don’t plant the mental and physical seeds of the results you want, weeds will grow automatically.
ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ စိတ်အခြေအနေ၊ ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အခြေအနေမျိုး ဖြစ်လာဖို့ အတွက် သင့်တော်တဲ့ မျိုးစေ့ကို မစိုက်ပျိုးရင် ပေါင်းပင်တွေ အလိုလို ပေါက်လာလိမ့်မယ်။
“အစကောင်းမှ အနှောင်းသေချာ” တဲ့။
If we don’t consciously direct our own mind and state, our environment may produce undesirable haphazard state, the result can be disastrous.
ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ် အခြေအနေတွေကို သိပြီးတော့ ဦးတည်ချက် မပေးခဲ့ရင် မလိုလားအပ်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေကို ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က ဖန်တီးလိမ့်မယ်။ ရလာတဲ့အကျိုးကလည်း သိပ်ထိခိုက် နစ်နာသွားနိုင်တယ်။
Thus, it’s critical that onadaily basis we stand guard at the door of our mind.
အရေးကြီးတာက နေ့ စဉ်နေ့ စဉ် ကိုယ့်စိတ်ရဲ့တံခါးဝမှာ အစောင့်ရှိဖို့ လိုတယ်။
ဆိုလိုတာက ကိုယ့်စိတ်ကို တံခါးဝနဲ့ တင်စားထားတာပါ။ သတိ ဆိုတဲ့ အရာကို အစောင့် အဖြစ်တင်စားပြီး အာရုံ အမျိုးမျိုး စိတ်ထဲ ၀င်လာပြီး ဘ၀ကို ဦးတည်ချက်ပျောက်အောင် လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာကို သတိ နဲ့ထိန်းချုပ်စေချင်တဲ့ သဘောကိုဆိုလိုပါတယ်။
That we know how we are consistently representing things to ourselves, we must daily weed our guarden.
အရာရာတိုင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘယ်လို အဓိပ္ပာယ် ကောက်နေသလဲဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိရမယ်။ ပြီးရင် ကိုယ့် ဥယျာဉ်လေး ကို နေ့ စဉ် ပေါင်းနှုတ်ဖို့ လိုတယ်။
Posted by kyaw at 2:37 AM0comments
ဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနောက် ဘုရားရှင်၏ တရားတော်များ မပျက်စီး မပျောက်ပျက်ရလေအောင် ဘုရားရှင်၏ တရားဓမ္မများအား ကျွမ်းကျင် တတ်ကျွမ်းသော သံဃာတော်များစုပေါင်းပြီး ဗုဒ္ဓ၏ ဓမ္မအား သန့်ရှင်း တည်တံ့ပြန့်ပွားနိုင်ရန်အတွက် စစ်မှန်သော ဓမ္မကိုသာ သံဃာများ၏ သဘောတူညီမှုရယူကာ ရွတ်ဖတ်မှတ်တမ်းတင် အတည်ပြုကြခြင်းကို သင်္ဂါယနာတင်ခြင်း ဟုခေါ်သည်။ မင်းထုနှင့် ပြည်သူထုမှ ပံ့ပိုးကူညီကြသည်။
သုဘဒ္ဒဟုခေါ်သော ရဟန်းသည် ဘုရားရှိစဉ် ကတည်းက ဝိနည်း (စည်းကမ်း)အား အကြိမ်ကြိမ်ဖောက်ပြန်ခဲ့သဖြင့် ဘုရားရှင်၏ အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးမှုကို ခံခဲ့ရသဖြင့် ဘုရားရှင်အား အငြှိုးထားခဲ့ရာမှ ဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသည်နှင့် လွတ်လပ်ပြီဆိုပြီး ကြွေးကြော်ကာ သာသနာအား ညှိုးနွမ်းအောင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်ကို အကြောင်းပြုပြီး တင်ခဲ့သည်။
ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီး (၃) လ နှင့် (၄) ရက်
ရာဇဂြိုလ်ပြည် ဝေဘာရတောင် သတ္တပဏ္ဏိလိုဏ်ဂူ
အရှင်မဟာကဿပမထေရ် ဦးဆောင်သော အရှင်ဥပါလိ (ဝိနည်း) နှင့် ညီတော်အာနန္ဒာ (သုတ္တန် နှင့် အဘိဓမ္မာ)
- သုဘဒ္ဒရဟန်းအားအကြောင်းပြုပြီး အရှင်မဟာကဿပမထေရ်မှ ဦးဆောင်ပြီး အရှင်ဥပါလိမှ ဝိနည်းတော်ကို၎င်း၊ ညီတော် အာနန္ဒာမှ သုတ္တန် နှင့် အဘိဓမ္မာကို၎င်း သံဃာအစည်းအဝေး သို့တင်သွင်းခဲ့သည်။
- ဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့သော ဓမ္မသည် လွန်စွာများပြားလှသဖြင့် တရား အစုအဖွဲ့ အသေးများ စုဖွဲ့ခြင်းကို ဓမ္မက္ခန္ဓာ ဖွဲ့ခြင်းဖြင့် ဓမ္မက္ခန္ဓာပေါင်း စုစုပေါင်း (၈၄၀၀၀) ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းကိုထပ်မံပြီး သဘောတရားတူရာ အလိုက် အုပ်စုဖွဲ့လိုက်ရာ အုပ်စု (၃) စုရရှိပြီး ပိဋကတ် (၃) ပုံ ဟုခေါ်တွင်သည်။
- ၎င်းပိဋကတ် (၃) ပုံမှာ ဝိနည်းပိဋကတ်တွင် ဓမ္မက္ခန္ဓာ (၂၁၀၀၀)၊ သုတ္တန်ပိဋကတ်တွင် ဓမ္မက္ခန္ဓာ (၂၁၀၀၀) ၊ အဘိဓမ္မာပိဋကတ်တွင် ဓမ္မက္ခန္ဓာ (၄၂၀၀၀) ထည့်သွင်းကာ သဘောတူခဲ့ကြသည်။
- အစည်းအဝေး တက်ရောက်ကြသော ရဟန္တာများသည် ဘုရားရှင်အား မီခဲ့ကြပြီး အနီးကပ်ဆုံးတရားတော်များ နာကြားသင်ယူခဲ့ရသည့် ပဋိသမ္ဘိဒါပတ္တ တန်ခိုးကြီးမားပြီး စင်ကြယ်လှသော ရဟန္တာကြီးများ ဖြစ်ကြသည်။
- ပထမအကြိမ်သင်္ဂါယနာတင်ခြင်းကို နှုတ်(ပါးစပ်) ပေါ်မှာသာ တင်ခဲ့ကြပြီး သံဃာအစည်းအဝေးတွင် ပိဋကတ် (၃) ပုံ စတင်သတ်မှတ် စီစဉ်ခဲ့ကြစဉ် ဘုရားရှင် ဟောကြားခဲ့သော တရားတော်များ အကုန်လုံးပြည့်စုံမှု ဖြစ်မဖြစ် (လိုနေလို့ ထပ်ဖြည့်ရန်၎င်း၊ ပိုနေလို့ နုတ်ပယ်ရန်၎င်း) ကိုစီစစ်ခဲ့ကြရာ အားလုံးမှ ပြည့်စုံပြီဖြစ်ကြောင်း တညီတညွတ်တည်း သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
- ဘုရားရှင်၏ ဓမ္မကို မူရင်းအတိုင်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပြီး လိုတိုးပိုလျော့ လုံးဝလုပ်ခွင့်မရှိ သံဃာတော်များမှ ထေရ်စဉ်ဝါစဉ်အလိုက် စောင့်ရှောက်ကြပါစို့ ဟုသဘောတူညီမှု ယူခဲ့ပြီး ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာ ဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပေသည်။
- ရဟန္တာ (၅၀၀) သောသံဃာထုခေါင်းဆောင်ပြီး အဇာတသတ်မင်းပါသော မင်းထု နှင့် သာသနာဝင်အားလုံး ပြည်သူထုမှ ပစ္စယာနုဂ္ဂဟ အဖြစ်ပံ့ပိုးကူညီခဲ့ကြပါသည်။
သာသနာနှစ် (၁၀၀) ကြာပြီးနောက် ဝဇ္ဇီတိုင်းသားရဟန်းများ (ဒေဝဒတ်၏ တပည့်များ) မှ အဓမ္မဝတ္ထု (၁၀) ပါးကို တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ဥပမာ - နေလက်တစ်သစ်လွဲသည်အထိ ထမင်းစားရန်၎င်း၊ သေနု (အရက်ခပ်ပျော့ပျော့) ကို သောက်ရန်၎င်း၊ ရွှေငွေများကို သာမာန်လူပုဂ္ဂိုလ်များကဲ့သို့ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုရန်၎င်း စသဖြင့် တောင်းဆိုခဲ့သည်မှာ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်လာသဖြင့် သာသနာညှိုးနွမ်းလာသည်ကို အကြောင်းပြုပြီးတင်ခဲ့သည်။
အရှင်ယသမထေရ် ဦးဆောင်သော အရှင်ရေဝတ နှင့် အရှင်သဗ္ဗကာမိ
- ဝဇ္ဇီတိုင်းသားရဟန်းပျက်များကို အကြောင်းပြုပြီး အရှင်ယသမထေရ်မှ ဦးဆောင်ပြီး အရှင်ရေဝတ နှင့် အရှင်သဗ္ဗကာမိ နှစ်ပါးမှ အမေးအဖြေများပြုလုပ်စီစစ်ခဲ့ကြပြီး နှုတ်ထက်အက္ခရာတင်ခဲ့ကြရာ (၈) လ ကြာမြင့်ခဲ့သည်။ ရဟန္တာ (၇၀၀) သော သံဃာထု ကာလာသောကမင်း၏ မင်းထု နှင့် ပြည်သူလူထု ၏ အကူအညီရယူပြီး ထု (၃) ထု ပူးပေါင်းပြီး ရဟန်း ပျက်များအား စီစစ်ခဲ့ရာမှ ရဟန်းပျက်ပေါင်း (၁၀၀၀၀) ကျော်အားနှင်ထုတ်ခဲ့ရသည်။
- ၎င်းရဟန်းပျက် (၁၀၀၀၀) ကျော်ကို တိုင်းပြည်မှ နှင်ထုတ်လိုက်ရာ ၎င်းတို့သည် ဟိမဝန္တာတောင်ခြေဖက်သို့ သွားရောက်ခဲ့ရာ ၎င်းနေရာရှိ မင်းတစ်ပါးမှ သနားပြီး ခိုလှုံ ခွင့်ပေးလိုက်ရာမှ ၎င်းတို့သည်လည်း သင်္ဂါယနာစင်ပြိုင်တင်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့မှာ ကြီးမားသော အင်အားရှိသဖြင့် မဟာသံဃိကဂိုဏ်း ဟုခေါ်ဆိုကြပြီး ဝေသာလီ၌ ကျန်ရှိခဲ့ကြသော ရဟန္တာ (၇၀၀) ပါသော အဖွဲ့အား ဟီနယာနဂိုဏ်း သေးငယ်သောအဖွဲ့ ဟုခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်။
- သာသနာတော်ညှိုးနွမ်းလာသော အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်ရန် သံဃာထု မင်းထု ပြည်သူလူထု (၃) ထုမှ ပူးပေါင်းပြီး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် လာခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပေသည်။
သာသနာနှစ် (၂၃၅) နှစ် ကြာပြီးနောက် ပါဋလိပုတ်ပြည်တွင် မိစ္ဆာအယူရှိသောရဟန်းအတု (၆၀၀၀၀) ကျော်အထိ သာသနာအတွင်း အယောင်ဆောင်ပြီး ဝင်ရောက်လာကြသည်ကို အကြောင်းပြုပြီး တင်ခဲ့ရသည်။
ပါဋလိပုတ်ပြည် ၊ အသောကာရုံကျောင်း
- ရဟန်းအတု (၆၀၀၀၀) ကျော် သာသနာအတွင်းဝင်ရောက်လာခဲ့ကြပြီး ကတုံးတုံးသင်္ကန်းစည်းသည် နှင့် ရဟန်းဖြစ်ပြီး လုပ်ချင်သလို လုပ်နေကြရာ သာသနာလွန်စွာမှ ညှိုးမှိန်လာခဲ့ပြီး ဝိနည်းတော်နှင့်အညီကျင့်ကြံအားထုတ်နေကြသော ရဟန်းအစစ်တို့မှာ လွန်စွာချို့ တဲ့ဒုက္ခ ရောက်ခဲ့ကြရသည်။
- အရှင်တိဿမထေရ်ကြီး ဦးဆောင်သော ရဟန္တာ (၁၀၀၀) ပါသော သံဃာထု၊ သီရိဓမ္မာသောကမင်း၏ မင်းထု နှင့် သာသနာဝင်များ ပြည်သူလူထု စသော ထု (၃) ထု ပူးပေါင်းပြီး နှုတ်ထက်အက္ခရာ သင်္ဂါယနာတင်ခဲ့ရာ အချိန် (၉) လ ကြာမြင့်ခဲ့သည်။
- အယောင်ဆောင်ဝင်လာသော ရဟန်းအတုများအား စီစစ်ပြီး လူဝတ်လဲစေခြင်း သာသနာတော်မှ နှင်ထုတ်ခဲ့ခြင်းတို့ဖြင့် သာသနာတော် ညှိုးနွမ်းနေမှုကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြပေသည်။
- သီရိဓမ္မာသောကမင်းသည် သင်္ဂါယနာတင်ပြီးနောက် ကိုးတိုင်းကိုးဌာန သာသနာပြုအဖွဲ့ စေလွှတ်ပြီး အကြီးမားဆုံးသော သာသနာပြုလုပ်ငန်းကို ကမ္ဘာအနှံ့ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကမ္ဘာ့အင်ပါယာတစ်ခုလုံး၏ (၅) ပုံ (၄) ပုံ သည် ဗုဒ္ဓသာသနာတော် လွှမ်းမိုးခဲ့ရသည်။
- မြန်မာနိုင်ငံသို့ သာသနာရောက်ရှိလာရခြင်းသည် သုဝဏ္ဏဘူမိ သာသနာပြုအဖွဲ့ မှ အရှင်သောဏ နှင့် အရှင်ဥတ္တရမထေရ် (၂) ပါး ဦးဆောင်သော ရဟန္တာ (၅) ပါးအဖွဲ့၏ သထုံဖက်မှ ဝင်ရောက် သာသနာပြုရာမှ အစပြုပြီး ရောက်ရှိလာရခြင်းဖြစ်သည်။
သာသနာနှစ် (၄၅၀) ကြာသော် သီဟိုဠ်နိုင်ငံသို့ သာသနာကူးပြောင်းလာခဲ့ရာတွင် အငတ်ဘေးနှင့် သူပုန်ဘေးကြီး (၁၂) နှစ် ကြာ ကျရောက်ခဲ့ရသဖြင့် သံဃာအစစ်များ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြမှုကို အကြောင်းပြုပြီး တင်ခဲ့သည်။
သီဟိုဠ်နိုင်ငံ၊ မလယဇနပုဒ်၊ အလောကလိုဏ်ဂူ
- သီရိဓမ္မာသောကမင်း၏ သားတော်ရဟန္တာမဟိန္ဒ နှင့် သမီးတော်ရဟန္တာ သင်္ဃမိတ္တာထေရီ တို့ ပြုခဲ့သော သာသနာသည် သီဟိုဠ်တွင် ထွန်းကားခဲ့ရာမှ အငတ်ဘေး နှင့် သူပုန်ဘေးများ (၁၂) နှစ်ကြာပေါ်ပေါက်သဖြင့် ဒါယကာ ဒါယိကာမများမှ ပစ္စည်းလေးပါးပံ့ပိုးမှု မရှိတော့သဖြင့် ဝိနည်းလေးစားသော သံဃာအစစ်တို့သည် ဒုက္ခရောက်ကြရသည်။
- အချို့သော သံဃာအစစ်တို့သည် ဘုရားရှင်၏ ဓမ္မများ မပျောက် ပျက်ရလေအောင် နှုတ်ဖြင့်ရွတ်ဆိုရင်း သဲသောင်ပေါ်တွင် ဗိုက်ပေါ်သဲများတင်ပြီး မမေ့လျော့အောင် ရွတ်ဖတ်ထိန်းသိမ်းနေကြသည်။ အချုိ့သော သံဃာတို့တွင်လည်း လွန်စွာချုိ့တဲ့ လာကြသဖြင့် နီဝရဏတရားများ လွှမ်းမိုးလာကြသည်။
- သူပုန်ဘေး (၁၂) နှစ်ကာလပြီးဆုံးချိန်တွင် သာသနာလွန်စွာ ညှိုးမှိန်နေသဖြင့် အရှင်မဟာဓမ္မရက္ခိတမထေရ် ဦးဆောင်သော ရဟန္တာ (၅၀၀) တို့ ပါဝင်သော သံဃာထု၊ အထောက်အပံ့ ပြုကြသော ဝဋ္ဋဂါမဏိမင်း၏ မင်းထု၊ သာသနာဝင်များ ပြည်သူလူထု ထု (၃) ထု ပူးပေါင်းဆောင်ရွတ်ကြသည်။
- ပိဋကတ်တော်များသည် နှုတ်ထက် အက္ခရာတင်လျှင်နောင်တွင် အလွယ်တကူ ပျောက်ကွယ် သွားနိုင်သည်ကို သိလာသဖြင့် မှတ်တမ်းအဖြစ် ပေရွက်ပေါ်ရေးတင်ပြီး ပေထက်အက္ခရာ တင်ခဲ့ရာ တစ်နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့သည်။
သာသနာနှစ် (၂၄၁၅) ကြာပြီးနောက် စတုတ္ထ နှင့် ပဉ္စမအကြိမ်ကြားတွင် နှစ်ပေါင်း (၂၀၀၀) ခန့် ကြာမြင့်ခဲ့သည့်အတွက် ပေရွက်ပေါ်တင်ထားမှု သည် ရာသီဥတု နှင့် ပိုးမွှားအန္တရာယ် တို့ကြောင့် ကြာရှည်ခံနိုင်မှု မရှိဘဲ ဖြစ်လာခြင်း မူကွဲများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတို့အပေါ် အကြောင်းပြု၍ တင်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၊ မန္တလေးမြို့  ရတနာပုံနေပြည်တော်
နှုတ်ဖြင့်ရွတ် (၅) လ (၃) ရက်
ကျောက်ထက်တင် (၇) နှစ် ၊ (၆) လ၊ (၁၄) ရက်
- သာသနာနှစ် (၂၄၁၅) နှစ် ကြာသော် ပေရွက်ပေါ်တင်ထားသော ပိဋကတ် (၃) ပုံတို့သည် ရာသီဥတု နှင့် ပိုးမွှားအန္တရာယ်တို့ကြောင့် ပျက်စီးလာခဲ့ခြင်း နှင့် အချို့ မူကွဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတို့ကြောင့် အရှင်ဇာဂရမထေရ် ဦးဆောင်သော ရဟန်း (၂၄၀၀) ပါဝင်သော သံဃာထု သည် ထောက်ပံ့ကူညီပေးသော မင်းတုန်းမင်း၏ မင်းထု နှင့် သာသနာဝင်များ ပြည်သူလူထု စသော ထု (၃) ထု ပူးပေါင်းပြီး မန္တလေးမြို့  ရတနာပုံနေပြည်တော် တွင် သင်္ဂါယနာတင်ခဲ့ကြသည်။
- နှုတ်ဖြင့်ရွတ်ဆိုတင်ခဲ့ခြင်းသည် (၅) လ နှင့် (၃) ရက် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးနောက် ပိဋကတ်တော် များကို ကမ္ဘာတည်သ၍ ကြာရှည် မပျက်စီးရလေအောင် စကျင်ကျောက်ပြား အပေါ် ၌ ထွင်းထုရေးသားခဲ့ရာ စကျင်ကျောက်ဖြူအပြားပေါင်း (၇၂၉) ချပ် ရရှိခဲ့ပြီး အချိန်အားဖြင့် (၇) နှစ်၊ (၆) လ နှင့် (၁၄) ရက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး ယနေ့တိုင် မန္တလေးလောကမာရဇိန် ဘုရားဝင်းအတွင်း ၌ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစာအုပ် (The World Biggest Book) ဟူသော အမည်ဖြင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဂုဏ်ဆောင်မှတ်တိုင်ကြီးအဖြစ် လွန်စွာထင်ရှားခဲ့ပေသည်။
သာသနာထွန်းကားရာ မြန်မာနိုင်ငံသည် တစ်ပါးသော ဘာသာဝင်တို့၏ သူ့ကျွန်ဘဝရောက်ခဲ့ပြီး နှစ် (၁၀၀) ခန့် သာသနာညှိုးနွမ်းခဲ့မှု အပေါ် အကြောင်းခံပြီး သာသနာနှစ်(၂၄၉၈) နှစ်တွင် သင်္ဂါယနာတင်ခဲ့ရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့  ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ၊ မဟာပါသာဏလိုဏ်ဂူ
ညောင်ရမ်းဆရာတော် အရှင်ရေဝတ၊ မဟာစည်ဆရာတော် အရှင်သောဘဏ၊ မင်းကွန်းဆရာတော် ဦးဝိစိတ္တသာရာဘိဝံသ
- ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားဆုံးဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံသည် သူ့ကျွန်ဘဝ နှစ် (၁၀၀) ခန့် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး သာသနာတော်လွန်စွာ ညှိုးနွမ်းလာခဲ့သည်။ သူ့ကျွန်ဘဝမှ လွတ်မြောက်လာသည်နှင့် သာသနာနှစ် (၂၄၉၈) နှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်မြို့  ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ၊ မဟာပါသာဏလိုဏ်ဂူတွင် ဆဌမအကြိမ်သင်္ဂါယနာတင်ပြီး သာသနာတော်ကို စောင့်ရှောက်ခဲ့ရသည်။
- ညောင်ရမ်းဆရာတော်၊ မဟာစည်ဆရာတော် နှင့် မင်းကွန်းဆရာတော်များ ဦးဆောင်သော ရဟန်း (၂၅၀၀) တွင် ထေရဝါဒနိုင်ငံများ ဖြစ်သော မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ လာအို၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ သီရိလင်္ကာ နိုင်ငံ (၅) နိုင်ငံမှ ရဟန်းများ ပါဝင်သော သံဃာထု၊ ဖဆပလ ဦးနု အစိုးရ ဦးဆောင်သော မင်းထု နှင့် သာသနာဝင် များ ပြည်သူလူထု စသော ထု (၃) ထု ပူးပေါင်းဆောင်ရွတ်ပြီး ယခင် ပိဋကတ်တော်များကို ကျောက်ပြားပေါ်မှာ ဖတ်နေရာမှ အလွယ်တကူဖတ်မှတ် လေ့လာနိုင်ရန ပိဋကတ်တော်များကို စာအုပ်များပေါ် တွင် ကူးပြောင်း ရိုက်နှိပ်ပြီး ဆဌမအကြိမ်သင်္ဂါယနာတင်ပြီး သာသနာတော်ကို စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြသည်။
- ယခုအချိန်တွင် ဗုဒ္ဓသာသနာတော် ပိဋကတ် (၃) ပုံ စလုံးသည် စာအုပ်များပေါ်တွင် ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သဖြင့် မည်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်မဆို နေရာမရွေး၊ အချိန်မရွေး အလွယ်တကူ ဖတ်မှတ် လေ့လာနိုင်လာပြီး သာသနာတော် သန့်ရှင်း တည်တံ့ ပြန့်ပွားရေးအတွက်လည်း အထူးအရေးပါလှပေသည်။
(၁) ပရိယတ္တိသာသနာသည် တရားဟော တရားပြ စာပေဖတ်မှတ် သင်ကြားခြင်း လုပ်ငန်း (စာသင်တိုက်များ၊ တရားပွဲများ ) နှင့်
(၂) ပဋိပတ္တိသာသနာသည် မိမိဗဟုသုတဖြင့် သိရသောစစ်မှန်သောတရားတော်များကို ခန္ဓာတွင်းမှာ သိမြင်လာအောင် ကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်လေ့ကျင့် ရသောလုပ်ငန်း (ဝိပဿနာရိပ်သာများ ၌ အားထုတ်ခြင်း) များကိုသာ အကျင့် (၂) ဖြာ ဟု ခေါ်ဆိုရပေမည်။
Posted by kyaw at 2:11 PM0comments
- သုမေဓါရသေ့ဘဝမှာ မိမိအတွက်ဆို နိဗ္ဗာန်သို့ မျက်မှောက်ပြုနိုင်သော်လည်း သတ္တဝါအားလုံး၏ အကျိုးအတွက် ကြည့်ရှုခဲ့သော ကျေးဇူးတော်
- ဘုရားအလောင်းတော်ဘဝတွင် ပါရမီ (၃၀) ကို ဘဝပေါင်း အနန္တ အသက်သွေးပေါင်း အနန္တတို့ဖြင့် ဖြည့်စွမ်းပေးခဲ့သော ကျေးဇူးတော်
- နောက်ဆုံးလူ့ဘဝတွင် လောကီချမ်းသာတို့၏ ထိပ်ခေါင် မင်းစည်းစိမ် ချမ်းသာအားလုံးကို စွန့်လွှတ်ပြီး သတ္တဝါ အားလုံးအကျိုးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကျေးဇူးတော်တို့သည် တုနှိုင်း၍ မရအောင် ကျေးဇူးကြီးမား လှပေသည်။
- ဘုရားဖြစ်ပြီးသည့်နောက် သတ္တဝါအားလုံးတို့အား ဒုက္ခသံသရာမှ လွတ်မြောက်ပြီး ချမ်းသာအစစ်နိဗ္ဗာန်သို့ မျက်မှောက်ပြုနိုင်ရေးအတွက် တရားဟောလမ်းညွှန်ပြသပေးခြင်း
- (၄၅) ဝါ (နှစ်) ပတ်လုံး တစ်နေ့တွင် တစ်နာရီမျှ ခန့်သာ ကျိန်း (အိပ်) တော်မူ၏။ အချိန်ရှိသလောက် သတ္တဝါ အားလုံးတို့အား တရားတော်များ ဟောပြော ပြသ ချီးမြှင့်တော်မူခဲ့ခြင်း
- သာသနာတော်ကို ထူထောင်ခဲ့သည့်အပြင် အနာဂတ်ကာလ သာသနာတော်ပြန့်ပွားရေးအတွက် များလှစွာသော ဓမ္မဒူတ ခရီးစဉ်များ စေလွှတ်ပြီး သာသနာပြုပေးခဲ့သော ကျေးဇူးတော်များသည် သတ္တဝါအားလုံးအတွက် လောကီ လောကုတ္တရာ နှစ်ဖြာသောအကျိုးကိုပေါ်ပေါက်စေခဲ့သည်မှာ ဆပ်၍မကုန်နိုင်သော ကျေးဇူးတော်များ ဖြစ်ပေသည်။
အမြင့်မြတ်ဆုံးသော ကျေးဇူးတော် (ဂုဏ်တော်)
- အနန္တစကြာဝဠာ သတ္တဝါအားလုံးတို့အား အမှန်ကိုသိမြင်စေရန်နှင့် ဥာဏ်အလင်းကို ထင်ရှားစွာ ရရှိကြရန်ပြသလမ်းညွှန်ပေးပြီး အကြီးမားဆုံးသော မေတ္တာနှင့် ကရုဏာထားတော်မူခဲ့သော ဘုရားရှင်၏ ကျေးဇူးတော်သည် အမြင့်မြတ်ဆုံးသော ကျေးဇူးတော်ဖြစ်ပေသည်။
- မှန်စွာသိမြင် နားလည်သဘောပေါက်လာကြသော ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှတို့သည် ဘုရားရှင်၏ အဆုံးအမများအား မပျက်စီး / မပျောက်ပျက်စေရန် ဝိုင်းဝန်းစောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်းကြရန် အထူးလုပ်ဆောင်လေတော့မည်။
- ဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနောက် ဘုရားရှင်၏ တရားတော်များ မပျက်စီး မပျောက်ပျက်ရလေအောင် ဘုရားရှင်၏ တရားဓမ္မများအား ကျွမ်းကျင် တတ်ကျွမ်းသော သံဃာတော်များစုပေါင်းပြီး ဗုဒ္ဓ၏ ဓမ္မအား သန့်ရှင်း တည်တံ့ပြန့်ပွားနိုင်ရန်အတွက် စစ်မှန်သော ဓမ္မကိုသာ သံဃာများ၏ သဘောတူညီမှုရယူကာ ရွတ်ဖတ်မှတ်တမ်းတင် အတည်ပြုကြခြင်းကို သင်္ဂါယနာတင်ခြင်း ဟုခေါ်သည်။ မင်းထုနှင့် ပြည်သူထုမှ ပံ့ပိုးကူညီကြသည်။
- ဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနောက် ဘုရားရှင်၏ တပည့်ရဟန်းတို့သည် ခေတ်အသီးသီးမှ အာဏာရှိသော မင်းထုနှင့် ဗုဒ္ဓသာသနာဝင်ပြည်သူလူထု ပူးပေါင်းပြီး သံဃာထု၊ မင်းထု၊ ပြည်သူလူထု၊ ထု (၃) ထု ပူးပေါင်းကာ သင်္ဂါယနာ (၆) ကြိမ် တိုင်တိုင် စုပေါင်းတင်ခဲ့ကြပြီး ဗုဒ္ဓသာသနာ့အမွေ မပျက်စီးမပျောက်ပျက်ရလေအောင် စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြလေသည်။
Posted by kyaw at 2:07 PM0comments
ဗုဒ္ဓအဆုံးအမ အားလုံးတို့သည် ဗဟုသုတရရုံမဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့လေ့ကျင့်ရန် နှင့် အကျိုးရှိ်အောင် အသုံးချရန် ဖြစ်သည်။
(Buddha’s Teachings are not for Knowledge only but also for Self Practice & Implementation)
- ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် အဆုံးအမ အားလုံးသည် ဗဟုသုတ ရရုံပါးစပ်ဖျားလေးမှ ပြောနေ ဟောနေရုံမျှ လမ်းဆုံးနေတာမျိုး တစ်ခွန်းမျှ မရှိခဲ့ပါဘူး။
- အဆုံးအမတိုင်းသည် ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ ကျင့်ရမယ်။ ပြီးမှ မိမိနှင့်အများအကျိုးအတွက် အကျိုးရှိအောင် လက်တွေ့အသုံးချပြီးမှ သာလျှင် အဓိပ္ပါယ် ပြည့်စုံပြီး ပန်းတိုင် (နိဗ္ဗာန်) သို့ မျက်မှောက်ပြုနိုင်ခြင်း သည်သာ အနှစ်သာရဖြစ်ပါသည်။
- လူချမ်းသာ နတ်ချမ်းသာ နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ သုံးမျိုးသော ချမ်းသာတို့တွင် လူနှင့်နတ်ချမ်းသာ တို့သည် ဒုက္ခသစ္စာနယ် (ဖြစ်ပေါ် ခြင်း ချုပ်ပျောက်ခြင်းတို့က အစဉ်ထာဝရ နှိပ်စက်သောနယ်) ထဲတွင်သာ ခံစားနေရပြီး သုံးဆယ် တစ်ဘုံသံသရာလည်စေပြီး ချမ်းသာအတု ဖြစ်သည်။
- နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ (မဖောက်မပြန် ပြုပြင်စီရင်မှုမရှိ ငြိမ်းအေးမှု အပြည့် ဒုက္ခ အားလုံးချုပ်ဆုံးခြင်း သံသရာမှလွတ်မြောက်ခြင်း) သည်သာလျှင် မဟာသန္တိသုခ ချမ်းသာ အစစ် ဖြစ်ပေသည်။
- ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ဘုရားကန်တော့ကြစဉ် သြကာသမှ စပြီးရွတ်ဆိုကြသည်။ (သြကာသ ဆိုသည်မှာ ခွင့်ပြုပါ ဘုရားဟု ခွင့်တောင်းခြင်းသာဖြစ်သည်၊ လူယဉ်ကျေးတို့၏ အလေ့အထ တစ်ခုဖြစ်သည်။)
- သြကာသရွတ်ပြီး ဘုရားရှိခိုးနေစဉ် ဘုရားရှင်၏ ပုံတော် (အကာ) ကိုကြည့်ပြီး ဘုရားရှင်၏ ဂုဏ်တော် (အနှစ်) ကို ရည်မှန်းပြီး ကန်တော့မှသာလျှင် အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံ ပေသည်။
- သြကာသဖြင့် ဘုရားကန်တော့ပြီးနောက် ဤသို့ ကန်တော့ရသော အကျိုးအားကြောင့် အပ္ပါယ်လေးပါး ကပ်သုံးပါး ရပ်ပြစ်ရှစ်ပါး စသည်ဖြင့် ဘေးအပေါင်းမှ လွတ်ရန် ရှည်လျားလှစွာသော ဆုတောင်းများကို ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ပါးစပ်ဖျားလေးဖြင့် ဆုတောင်းကာ နောက်ဆုံး နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပင်လျှင် ပါးစပ်ဖြင့်တောင်းရုံနှင့်ရသကဲ့သို့ မှားယွင်းစွာ ဆုတောင်းနေကြလေသည်။ အမှန်မှာ ဆုတောင်းသကဲ့သို့ လက်တွေ့ကျင့်ရန်သာ အဓိကဖြစ်သည်။
(က) အပါယ်လေးပါး ဘေးမှလွတ်ရန်ကား
အပါယ်လေးပါးဆိုသောအဓိပ္ပါယ်နှင့် အပါယ်ကျစေနိုင်သော အကြောင်းတရားနှင့် အပါယ်လွတ်ရန် ကိုယ်တိုင် လေ့ကျင့်ရမည့်တရားတို့ကို သိရှိလေ့ကျင့်ရန်လိုပေသည်။
(၁) တိရစ္ဆာန်ဘုံရောက်ခြင်းသည် မောဟ (အမှားသိ တွေဝေ) ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၎င်းမောဟဆိုသောအကြောင်းကို သတ်မှ သာလျှင် အကျိုးတိရစ္ဆာန်ဘုံမရောက်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
(၂) ပြိတ္တာဘုံ ရောက်ခြင်းသည် လောဘ (လိုချင်တပ်မက်) ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၎င်းလောဘဆိုသောအကြောင်းကို သတ်မှသာလျှင် အကျိုးပြိတ္တာဘုံမရောက်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
(၃) အသူရကာယ် (အရံငရဲ) ဘုံရောက်ခြင်းသည် မာန(ထောင်လွှားမှု) ကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၎င်းမာနဆိုသောအကြောင်းကို သတ်မှသာလျှင် အကျိုး အသူရကာယ်ဘုံ မရောက်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
(၄) ငရဲဘုံရောက်ခြင်းသည် ဒေါသ (ကြမ်းတမ်း ခက်ထန်) ကြောင့် ဖြစ်ပြီး ၎င်းဒေါသဆိုသော အကြောင်းကို သတ်မှသာလျှင် အကျိုးငရဲဘုံမရောက်ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။
အပါယ်လေးပါးမှ လွတ်ချင်ပါ၏လို့ ဆုတောင်းနေရုံဖြင့် အပါယ်မှ မလွတ်နိုင်၊ အပါယ်ရောက်စေနိုင်သော လောဘ ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ မာန တို့ကို ကိုယ်တိုင် လေ့ကျင့်ပယ်သတ်မှသာလျှင် လွတ်နိုင်ပေမည်။
(ခ) ကပ်သုံးပါးဘေးမှ လွတ်ရန်ကား
ကပ်သုံးပါး၏ အဓိပ္ပာယ်နှင့် ကပ်ဘေးကို ဖြစ်စေနိုင်သော အကြောင်းတရား (မီး) ကို သိရန်လိုအပ်ပြီး အကြောင်းကို ခေတ္တထိန်းနိုင်သော တရားနှင့် အကြောင်းတရား (မီး) ကို အငုတ်ပြုတ်စေနိုင်သောတရားကိုသိရှိ လေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
ကပ်သုံးပါးြ ဖစ်စေသောအကြောင်း ခေတ္တထိန်း
၁။ ဒုဗ္ဘိက္ခန္တရကပ် လောဘ ဒါန
၂။ သတ္တန္တရကပ် ဒေါသ သီလ
၃။ ရောဂန္တရကပ် မောဟ ဘာဝနာ
(ရောပါဘေး) (အဖန်တလဲလဲ ရှုမှတ်ပွားများ)
- ငတ်မွတ်ဘေး (ကပ်) ဖြစ်ရခြင်းသည် လောဘအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၎င်းလောဘမီးကို ခေတ္တခဏအားဖြင့် ဒါနပြုခြင်းဖြင့် ထိန်းထားနိုင်သည်။ သတ်ဖြတ်ဘေး (ကပ်) သည် ဒေါသကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၎င်းဒေါသကို ခေတ္တခဏအားဖြင့် သီလဖြင့် ထိန်းထားနိုင်သည်။ ရောဂါဘေး (ကပ်) သည် မောဟကြောင့်ဖြစ်ပြီး ၎င်းမောဟကို ခေတ္တခဏအားဖြင့် ဘာဝနာဖြင့် ထိန်းထားနိုင်သည်။
- ကပ်သုံးပါးစလုံး အငုတ်ပြုတ်နိုင်ရန်ကား ဝိပဿနာ၊ ဘာဝနာ (အနိစ္စ၊ ဒုက္ခ၊ အနတ္တ) ရှုမှတ်ပွားများနေရမည် ဖြစ်သည်။
- ကပ်သုံးပါးမှ လွတ်မြောက်ချင်ပါ၏ လို့ ဆုတောင်းနေရုံမျှဖြင့် ကပ်သုံးပါးမှ မလွတ်နိုင်၊ ကပ်သုံးပါးကို ဖြစ်စေသော လောဘမီး၊ ဒေါသမီး၊ မောဟမီး တို့ကို မိမိကိုယ်တိုင်လည်း လေ့ကျင့်ပြီး ပယ်သတ်၊ အားလုံးသောသတ္တဝါအပေါင်းတို့မှလည်း လေ့ကျင့်ပြီး ပယ်သတ်နိုင်ကြမှသာလျှင် ကပ်ဘေးတို့မှ လွတ်မြောက်နိုင်ပေမည်။
ဒုစရိုက် / သုစရိုက်
ဒုစရိုက် (၁၀) ပါး (ဒု = မကောင်းသော ၊ စရိုက် = အကျင့်)
(၁) သတ် (သတ္တဝါများ)
(၂) ခိုး (တစ်ပါးသူပိုင် ပစ္စည်း)
(ခ) ဝစီကံ (၄) ပါး
(၂) ကုန်းတိုက် (ညီညွတ်မှုပြိုကွဲစေခြင်း)
(၄) အချည်းနှီး (အကျိုးမရှိသော စကားပြောခြင်း)
(၂) ဗျာပါဒ (သူတစ်ပါးကို သေကြေပျက်စီး စေလိုခြင်း)
(၃) မိစ္ဆာဒိဌိ (အယူမှားခြင်း)
ဒုစရိုက် (၁၀) ပါး ပွား (၄၀)
(၃) သွယ်ဝိုက်အားပေး (၁၀) ပါး
(၄) ဝမ်းမြောက် (၁၀) ပါး
သုစရိုက် (၁၀) ပါး (သု = ကောင်းသော၊ စရိုက် = အကျင့်)
(ခ) ဝစီကံ (၄) ပါး ဒုစရိုက် (၁၀) ပါးကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်း သည် သုစရိုက် (၁၀) ပါး ဖြစ်သည်။
သုစရိုက် (၁၀) ပါးလည်း ပွားလျှင် (၄၀) ရသည်။
၎င်းဒုစရိုက် / သုစရိုက်တို့သည်လည်း ပါးစပ်ဖျားဖြင့် ပြောနေ၊ ဟောနေရုံမျှဖြင့် အဓိပ္ပါယ်မပြည့်စုံဘဲ ဒုစရိုက်ကို ကိုယ်တိုင်လုံးဝ ရှောင်ကြဉ်ကြပြီး သုစရိုက်ကို လက်တွေ့လေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်ကြပြီး မိမိနှင့် အများအကျိုး ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာလျှင် ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
မေတ္တာ = တစ်ပါးသူအား ကောင်းစေချင်သော စေတနာ အပြုမြင်ဝါဒ (တန်းတူတွေ့လျှင် မေတ္တာမပွားနိုင်က ပြိုင်တတ်သည်။)
ကရုဏာ =တစ်ပါးသူအား ဝဋ်ဒုက္ခဘေးဆင်းရဲတို့မှ လွတ်မြောက်စေလိုသော စေတနာ (ကိုယ့်အောက်နိမ့်လျှင် ကရုဏာ မထားနိုင်က နိုင်တတ်သည်။)
မုဒိတာ = သူတစ်ပါးကောင်းစားတာ ဝမ်းမြောက်ခြင်း(ကိုယ့်ထက်သာလျှင် မုဒိတာ မပွားနိုင်က ငြူစူစောင်းမြောင်း တတ်သည်။)
ဥပေက္ခာ = ချစ်လည်းမချစ်၊ မုန်းလည်းမမုန်းခြင်း (လစ်လျူရှုခြင်း)(သတ္တဝါအားလုံးတို့သည် မိမိပြုသော ကံအတိုင်းကိုသာ မိမိရကြသည်။)
ဗြဟ္မစိုရ်တရား (၄) ပါးသည် နတ်လူသတ္တဝါ အားလုံးတို့၏ ချစ်ဆေးဖြစ်၍ ပါးစပ်ဖျားမှ ပြောနေရုံမျှဖြင့် မပြည့်စုံနိုင်ပါ။ လက်တွေ့လေ့ကျင့်လုပ်ဆောင်ကြပြီး နှလုံးသွင်းကာ အသုံးချခြင်းဖြင့် ငြိမ်းချမ်းသာယာသော လောကကြီး ဖြစ်လာပေလိမ့်မည်။
ကောင်းမှု ကုသိုလ် ပုည ဘုန်း (သို့) အဆင့်ဆင့်ကူးပြောင်း ခေါ်ဝေါ်လာကြရာ ယခုအခါ ဘုန်းကြီးသည်ဆိုလျှင် လူတိုင်းနှစ်သက်ကြပေရာ ကောင်းမှုများခြင်းသည်သာ ဘုန်းကြီးကြကြောင်း သိအပ်ပေသည်။
(၁) ရိုးရိုးဒါန (လှူဒါန်းခြင်း)
(၃) ပတ္တာနုမောဒန (သာဓုခေါ် ခြင်း)
(၁) ရိုးရိုးသီလ (ကာယနှင့်ဝစီစောင့်ထိန်းခြင်း)
(၂) အပစာယန (ရိုသေခြင်း)
(၃) ဝေယျာဝစ္စ (လုပ်အားပေးခြင်း)
(၁) ရိုးရိုးဘာဝနာ (မေတ္တာဘာဝနာပွားခြင်း ဘုရားဂုဏ်တော် စသည် အာရုံမွားနေခြင်း)
(၂) ဓမ္မဿဝန (တရားနာယူခြင်း)
(၄) ဒိဌိဇုကမ္မ (အယူမှန်ခြင်း)
ပုညကြိယာ (၁၀)ပါး သည်လည်း ဟောပြောနေရုံနှင့် မပြီးဘဲ ကိုယ်တိုင်လည်းလေ့ကျင့်၊ သူတစ်ပါးအားလုံးကိုလည်း လေ့ကျင့်ကြစေရန် စည်းရုံးတိုက်တွန်းပြီး အသုံးချကြမှသာလျှင် ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကျ အကျိုးရှိပေမည်။
Posted by kyaw at 1:50 PM0comments
သုမေဓါရသေ့ဘ၀ မရောက်မီ ဘုရားအလောင်းတော်၏ မိဘနှစ်ပါး လွန်စွာပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာပေမဲ့ ၎င်းမိဘနှစ်ပါး သေဆုံးသည့်အခါ ပစ္စည်းဥစ္စာများ ဘာမျှယူမသွားနိုင်သောကြောင့် လူတွေမှာသေဆုံးလို့ဘာမျှပါမသွားနိုင်တာရှိလျှင် သေဆုံးပြီးပါအောင် ယူသွားနိုင်တာ ရှိကိုရှိရမယ်လို့ တွေးမိပြီး ပစ္စည်းဥစ္စာ အားလုံး စွန့် လွှတ် လှူဒါန်းပြီး ရသေ့ဘ၀ပြောင်း တရားကျင့်ခဲ့သည်။
ဘုရားအလောင်းတော်သုမေဓာသည် ဒီပင်္ကရာဘုရားရှင်နှင့် တွေ့ ပြီး နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပေမဲ့ဒီပင်္ကရာဘုရားရှင် ကဲ့သို့ သတ္တ၀ါများအား လမ်းညွှန်(ကယ်တင်) လိုသော ဆန္ဒာဓိပတိကြောင့်သာလျှင် ဘုရားဆုပန်လေသည်။
ယခုမျက်မှောက်နေဆဲ ကမ္ဘာမတိုင်မီ အရှေ့ လေးသင်္ချေ ကမ္ဘာတစ်သိန်းအစ ဒီပင်္ကရာဘုရားရှင်၏ ခြေတော်ရင်း၌ သုမေဓာရှင်ရသေ့ဘ၀မှစပြီး ဘုရားဆုပန် ဗျာဒိတ် ယူခဲ့သည်။
(တစ်ကမ္ဘာသည် မရေတွက်နိုင်အောင်ကြာလှပြီး သင်္ချေတစ်ခုသည် တစ်၏နောက်မှ သုညပေါင်း တစ်ရာ့လေးဆယ်ရှိသည်။)
(ဃ) ပါရမီ (ဆယ်ပါး - ပြားသုံးဆယ်)
၁။ ဒါန = ပေးလှူခြင်း
၂။ သီလ = ကိုယ်နှုတ်စောင့်ထိန်းခြင်း
၃။ နေက္ခမ္မ = ကိလေသာတောမှ ထွက်ခြင်း
၄။ ပညာ = အကြောင်းအကျိုး ဆင်ခြင် ထိုးထွင်းသိခြင်း
၅။ ၀ီရိယ = အားစိုက်ကြိုးစား လုံ့ လရှိခြင်း
၆။ ခ န္တီ = သည်းခံခြင်း
၇။ သစ္စာ = ဖြောင့်မတ်/ မှန်ကန်ခြင်း
၈။ အဓိဌာန် = အဓိဌာန်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ပြတ်သားသော ဆန္ဒ
၉။ မေတ္တာ = စင်ကြယ်သောချစ်ခြင်း
၁၀။ ဥပေက္ခာ = လျစ်လျုရှုခြင်း/ အသင့်အားဖြင့်ရှုခြင်း
- မူလပါရမီ (၁၀) ပါး
(ပိုင်ဆိုင်စည်းစိမ်အားလုံးနှင့် ဇနီး၊ သားသမီးပါမကျန် ဖြည့်ခြင်း)
- ဥပပါရမီ (၁၀) ပါး
(စည်းစိမ် + ဇနီး၊ သားသမီးအပြင် မိမိခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်း ပါဝင် ဖြည့်ခြင်း)
- ပရမတ္ထပါရမီ (၁၀) ပါး
(စ) တိတိကျကျသေသေချာချာ ပွင့်တော်မူခြင်း
(၂) မွေးဖွား နှစ်၊ လ၊ ရက် (မဟာသက္ကရာဇ် - ၆၈၊ ကဆုန်လပြည့်၊ သောကြာနေ့ )
(၃) မိဘနှစ်ပါး (သုဒ္ဓေါဒနမင်းကြီး နှင့် မယ်တော်မာယာဒေ၀ီ)
(၄) မွေးဖွားနေရာ (အိန္ဒိယ နှင့် နီပေါနယ်စပ်အနီး၊ နီပေါနိုင်ငံပိုင် လုမ္ဗနီ ဥယျာဉ်)
(၆) မွေးမွေးခြင်း ဘုရားမဖြစ်၊ ကျင့်ပြီးမှဖြစ် (ကျင့်စဉ်အားလုံး တိကျသေချာပြထားသည်)
(၇)ဘုရားဖြစ်သောရက် တိကျသေချာ (မဟာသက္ကရာဇ် - ၁၀၃၊ ကဆုန်လပြည့်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ )
ကဆုန်လပြည့် (၅) နေ့ 
(၁) ဗျာဒိတ်ယူသည့်နေ့= လေး သင်္ချေကမ္ဘာတစ်သိန်း အစ ကဆုန်လပြည့်နေ့ 
(၂) ဘုရားမွေးသည့်နေ့= မဟာသက္ကရာဇ် - ၆၈၊ ကဆုန်လပြည့် (သောကြာနေ့ )
(၃) ဘုရားဖြစ်သည့်နေ့= မဟာသက္ကရာဇ် - ၁၀၃၊ ကဆုန်လပြည့် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ )
(၄) ဗုဒ္ဓ၀င်အကျဉ်းဟောသည့်နေ့= မဟာသက္ကရာဇ် - ၁၀၄၊ ကဆုန်လပြည့်
(၅) ပရိနိဗ္ဗာန်စံသည့်နေ့= မဟာသက္ကရာဇ် - ၁၄၈၊ ကဆုန်လပြည့် (အင်္ဂါနေ့ )
( ကဆုန်လပြည့်၊ ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲ ကျင်းပရခြင်း အထိမ်းအမှတ်သည် ဘုရား၏ ပရိဘောဂစေတီကို စုပေါင်းပူဇော်ပြီး ညောင်ပင်အသက်ရှည် စိမ်းလမ်းစိုပြေ သကဲ့သို့သာသနာတော်သန့် ရှင်း၊ တည်တံ့၊ ပွားများနိုင်ရန်။)
၀ါဆိုလပြည့် (၅) နေ့ 
(၅) သံဃာရတနာစပေါ်သည့်နေ့= မဟာသက္ကရာဇ် - ၁၀၃၊ ၀ါဆိုလပြည့် (စနေနေ့ )
( သာသနာဝင်များသည် ၀ါဆိုလပြည့်နေ့ ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို လေးလေးနက်နက်နားလည် သင့်ပေသည်။)
(၁) ဘုရားရှင်သည် မယ်တော်မိနတ်သားအား ၀ါတွင်းသုံးလလုံး အဘိဓမ္မာတရား ဟောကြားခြင်း
(၂) မိဘအားကျေးဇူးဆပ်ပြီး လူ့ ပြည်ဆင်းစဉ် လူသားများ ဆီမီးဖြင့် ပူဇော်ကန်တော့ခြင်းကို အစွဲပြုပြီး မီးဖြင့်ကန်တော့ကြသည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓ အလိုတော်ကျမှာ -
- အဘိဓမ္မာတရားတော် ပြန့် ပွားနားလည်အောင်လုပ်ရန်
- မိဘနှင့်ကျေးဇူးရှင်များကို ကျေးဇူးဆပ် ကန်တော့ရန်
(လွန်ကဲသော မီးထွန်းကြခြင်း၊ ဥပမာ - အိမ်သာမကျန် နှင့် ဗျောက်အိုး နှင့် မီးရှူးမီးပန်းများ ဖောက်ကြခြင်းသည် မိမိတို့ ၏ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ လုပ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ )
ရာဇဂြိုလ်ပြည်၊ ဝေဠုဝန်ကျောင်းတိုက်၌ ရဟန္တာပေါင်း ၁၂၅၀ တက်ရောက်သော ‘ပထမသံဃသန္နိပါတ’ ပထမဆုံးသံဃာ့ အစည်းအဝေးကျင်းပပြီး ဘုရားအဆူဆူ ဆုံးမစကား သြ၀ါဒပါတိမောက် ချီးမြှင့်သောနေ့ ဖြစ်ပြီး လက်ျာရံ အဂ္ဂသာဝက အရှင်သာရိပုတ္တရာ နှင့် လက်ဝဲရံ အဂ္ဂသာဝက အရှင်မောဂ္ဂလာန်တို့ အား ရာထူးအပ်နှင်းသော နေ့ ဖြစ်သည်။
သြ၀ါဒပါတိမောက်၏ အနှစ်ချုပ်မှာ -
(၁) လွန်စွာချုပ်တည်းခြင်းတည်းဟူသော သည်းခံခြင်းသည် အလွန်မြင့်မြတ်သော အကျင့်ပေတည်း။
(၂) မိမိစိတ်ကို သန့် ရှင်းဖြူစင်စေရာ၏။
(၃) ထူးမြတ်သောအကျင့်၌ လွန်စွာအားထုတ်ရာ၏။
ဘုရားအလောင်းတော်သည် (၂၉)နှစ်ထိ ကာမဂုဏ် အာရုံတို့ ဖြင့် ပျော်ပါးနေခဲ့သော “ကာမသုခလ္လိကာနုယောဂ” လက်ယာစွန်း ရောက်နေစဉ် လောဘကိုသာ ဖြစ်စေပြီး၊ (၂၉) နှစ်မှ (၃၅) နှစ်အထိ (၆) နှစ်လုံးလုံး ခန္ဓာကိုယ်ကို အမျိုးမျိုး နှိပ်စက်ညှင်းဆဲပြီး ကျင့်သော ဒုက္ကရစရိယာအကျင့် “အတ္တကိလမထာနုယောဂ” လက်ဝဲစွန်း ရောက်နေစဉ် ဒေါသကိုသာ ဖြစ်စေသဖြင့် တရားမရ ဖြစ်နေသောကြောင့် ၎င်းအစွန်း နှစ်ပါးကို ရှောင်ရှားပြီး “ မဇ္ဈိမပဋိပဒါ “ (ခေါ်) မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး အကျင့်ကို ကျင့်မှသာလျှင် သစ္စာလေးပါး ကိုသိမြင်နိုင်သော တရား ဖြစ်သည်ဟု ဟောကြားသော တရားဖြစ်သည်။
အစဉ်ထာဝရ မှန်ကန်သော အမှန်တရား
(ဂ) Time အချိန်မရွေး မှန်ကန်သော သစ္စာတရား ဖြစ်သည်။
သီလ (၁) မှန်စွာပြော (ပြော)
(စည်းကမ်း) (၂) မှန်စွာပြုမူ ( ပြု )
(ကာယ + ဝစီ) ထိန်း (၃) မှန်စွာအသက်မွေး (မွေး)
သမာဓိ (၄) မှန်စွာဝီရိယ (ဝီ)
(နည်းလမ်း) (၅) မှန်စွာသတိ (တိ)
(မနော) ထိန်း (၆) မှန်စွာသမာဓိ (ဓိ)
ပညာ (၇) မှန်စွာသိမြင် (သိ)
(သဘောတရား) (ဂ) မှန်စွာတွေးခေါ် (တွေး)
(အရှိ / အမှန်)
မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးကို ချုံ့ လျှင် သီလ - သမာဓိ - ပညာ သိက္ခာသုံးပါးရပြီး ၎င်းသိက္ခာသုံးပါးကို အနှစ်ချုပ်လျှင် သတိတစ်လုံးသည်သာ ကျန်တော့သည်။ ဗုဒ္ဓ၏ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသည် တစ်ကြောင်းတည်းသောလမ်း မဟာသတိပဌာန်တရားဖြစ်သည်။ (သတိတစ်လုံးအရှိသုံး အဆုံးနိဗ္ဗာန်တိုင်)
ကုသိုလ်ကောင်းမှု (၄) မျိုး
၁။ ဒါန (စွန့် လွှတ် - လှူဒါန်း)
၂။ သီလ (ကာယ + ဝစီ ထိန်းသောစည်းကမ်း)
၃။ သမထဘာဝနာ (ကမ္မဌာန်းအာရုံ တစ်ခုတည်းကိုသာ ရှုခြင်း)
၄။ ဝိပဿနာ ဘာဝနာ (ရုပ်နာမ်တရားတို့ ၏ ဖြစ်ပျက်ကို ရှုခြင်း)
- ဒါန၊ သီလ၊ သမထဘာဝနာ စသည်သုံးမျိုးသည် ဘုရားမပွင့်မှီ ကာလများစွာကပင် ရှိခဲ့ပေသည်။
- လူချမ်းသာ နတ်ချမ်းသာ ဗြဟ္မာချမ်းသာများကို ရစေပြီး ကံအကျိုးပေး သာလျှင်ရရှိကာ သံသရာလည်ပြီး ဒုက္ခသစ္စာမှ မလွတ်မြောက်နိုင်ပေ။
- ဘုရားပွင့်လာရခြင်းသည် သတ္တဝါများအားလုံး ဒုက္ခဆင်းရဲ အပေါင်းမှလွတ်မြောက်စေနိုင်သော ဝိပဿနာဘာဝနာ ရှုမှတ်ပွားများနိုင်စေရန် လမ်းညွှန်ပေးရန်ဖြစ်ပြီး ဒုက္ခသစ္စာမှ လွတ်မြောက်ပြီး နိရောဓသစ္စာ (နိဗ္ဗာန်) သို့မျက်မှောက် ပြုနိုင်သော ဥာဏ်အကျိုးပေး ကို ညွှန်ပြပေးနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။
၁။ ပရိယတ္တိသာသနာ (ဟောပြောခြင်း၊ စာပေမှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ သင်ကြားခြင်း)
၂။ ပဋိပတ္တိသာသနာ (မိမိခန္ဓာကိုယ်တွင်းသို့မိမိဥာဏ်ဖြင့် ရှုမှတ်ပွားများ လေ့ကျင့်ခြင်း)
၃။ ပဋိဝေဓသာသနာ (ပဋိပတ္တိသာသနာ အကျင့်ကျင့်ပြီးမှသာလျှင် အရှိတရား၊ အမှန်တရား၊ သဘောတရားများသိမြင်လာပြီး မဂ်ဥာဏ်၊ ဖိုလ်ဥာဏ်၊ နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုအကျိုး ရရှိခြင်း)
ဘုရားသာသနာ သုံးရပ်တွင် - သာသနာပြုရန် ပံ့ပိုးခြင်း၊ လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည့် အကျင့်နှစ်ဖြာဖြစ်သော ပရိယတ္တိ နှင့် ပရိပတ္တိသာရှိပေသည်။
(ပဋိဝေဓသာသနာသည် ကျင့်ပြီးမှသာလျှင် ရရှိသောအကျိုးဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပေသည်။)
(က) အရဟံ = လူ နတ် ဗြဟ္မာ တို့ ၏ ပူဇော်အထူးကို ခံထိုက်ခြင်း။
(ခ) အရ ဟံ = ကိလေသာရန်သူတို့ ကို ပယ်သတ်တော်မူပြီး ဖြစ်ခြင်း။
(ဂ) အ ရဟံ = ဆိတ်ကွယ်ရာ၌ပင် မကောင်းမှု မပြုခြင်း။
(၂) သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓ = အလုံးစုံသောတရားတို့ ကို ဆရာမရှိပါဘဲ ပါရမီစွမ်းအားဖြင့် သိခြင်း။
(၃) ဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္န = အသိဥာဏ် (ဝိဇ္ဇာ)၊ အကျင့်တရား (စရဏ) တို့ နှင့် ပြည့်စုံခြင်း။
(၄) သုဂတ = ကောင်းမြတ်သော စကား (သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ) ကိုသာပြောခြင်း (ကောင်းသောသွားလာခြင်း / လာခြင်း)
(၅) လောကဝိဒူ = လောကကြီး သုံးပါးကို သိခြင်း။ (သတ္တ၊ သြကာသ၊ သင်္ခါရ)
(၆) အနုတ္တရောပုရိသ = ရိုင်းစိုင်းသော တိရိ စ္ဆာန်၊ လူ၊ နတ် တို့ ကို ယဉ်ကျေး သိမ်မွေ့ အောင်ဆုံးမခြင်း။
(၇) သတ္ထာဒေဝ = လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တဝါအားလုံးတို့ ၏ ဆရာဖြစ်ခြင်း။
(၈) ဗုဒ္ဓ = အမှန် (သစ္စာ) တရား လေးပါးကို သိခြင်း၊ ဟောကြားပြသခြင်း။
(၉) ဘဂဝါ = ဘုန်းတော် (၆) ပါး နှင့် ပြည့်စုံခြင်း။
(၁) ဟော = ဘုရားကိုယ်တိုင် ဟောခြင်း။
(၂) ကိုယ် = ကျင့်ကြံသူအတွက် မျက်မှောက်ဘဝ၌ပင် ကိုယ်တိုင် ရှုမြင် နိုင်ခြင်း။
(၃) ဆိုင်း = ရှုပွားသူအတွက် မဂ်ပြီးလျှင် ဖိုလ် အချိန်မဆိုင်းဘဲ ဖြစ်ခြင်း။
(၄) ဖိတ် = တရားနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ဖိတ်ခေါ် ရဲခြင်း။
(၅) ကပ် = မိမိသ န္တာန်၌ အစဉ်ကပ်၍ ဆောင်ထားသင့်ခြင်း။
(၆) လက် = မဂ်၊ ဖိုလ်၊ နိဗ္ဗာန် ဓမ္မရသကို လက်တွေ့ ခံစားနိုင်ခြင်း။
သံဃာဂုဏ်တော် (၉) ပါး
(၁) ကောင်း = ကောင်းသောအကျင့်ရှိခြင်း။
(၂) ဖြောင့် = ဖြောင့်မတ်စွာ ကျင့်ကြံခြင်း။
(၃) နိဗ် = နိဗ္ဗာန်ရောက်ရေး ကျင့်ခြင်း။
(၄) လော = လောကုတ္တရာတရားနဲ့ အညီကျင့်ခြင်း။
(၅) ဝေး = အဝေးက သယ်ဆောင်လာသည့် ပစ္စည်းကိုပင် ခံယူထိုက်ခြင်း။
(၆) ဧည့် = ဧည့်သည်အတွက် အထူးစီမံထားသည့် ပစ္စည်းကိုပင် အလှူ ခံထိုက်ခြင်း။
(၇) မြင့် = မြင့်မြတ်သော အလှူကို ခံထိုက်ခြင်း။
(၉) လယ် = သတ္တဝါအပေါင်းတို့၏ ဒါနမျိုးစေ့ စိုက်ပျိုးရာ လယ်မြေ ကောင်းဖြစ်ခြင်း။
တရားဂုဏ်တော် နှင့် သံဃာဂုဏ်တော် တို့၏ ပါဠိတော်တို့ကို မဖော်ပြထားပါ။ ဥပမာ - သွာက္ခာတော ဘဂဝတာ ဓမ္မော ..ကို ဟော ဟုသာ အတိုချုပ်ဖော်ပြထားပါသည်။
(၃) ကိုးကွယ်မှု မှားယွင်းသူ
(ဥပမာ - ဘုရားအဆုံးအမတွင်မပါသော သစ်သီးအမျိုးမျိုးကို ၎င်း၊ မခိုင်မာသည့် ရုပ်ပုံ၊ ပန်းပုများကို ၎င်း၊ မမြင်မသိရသည်များကို သူများအပြော မျက်စိမှိတ်ပြီး ကိုးကွယ်သူ)
သရဏဂုံတည်သူ (ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် အစစ်ဖြစ်သူ)
- ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာရတနာ သုံးပါးတို့၏ ဂုဏ်တော် (ကျေးဇူး) ကို အစဉ်နှလုံးသွင်းကာ အားကိုးအပ်နှံပြီး ရတနာသုံးပါးတို့၏ အဆုံးအမကိုသာ လိုက်နာကျင့်သုံး နေသူသည်သာလျှင် သရဏဂုံတည်သူ ဖြစ်လေသည်။
Posted by kyaw at 12:54 PM0comments
(The Essence of Buddha’s Teaching)
(က) ကိုးကွယ်မှု = အားကိုးလျှင် - ကာကွယ်ပေးခြင်း
(အမှား) - ကြောက်ရွံ့ မှု (ကမ္ဘာဦးအစ ကပ်ဘေးများကြုံ)၊ ဆုလဒ် ရလိုမှု (သားဆုပန်၊ လာဘ် လာဘ လိုခြင်း) ကြောင့် မသိမမြင် ၊ အကြောင်းအကျိုး မမှန်တာလုပ်သော မှားယွင်းသော အယူ ။
(အမှန်) - အကြောင်းအကျိုး မှန်ကန်မှုရှိသော ကိုးကွယ်မှု ဆိုလျှင် ခွန်အားမျှ ဖြစ်သည် ။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဘာသာကြီးလေးမျိုးအနက်မှ - ဟိန္ဒူဘာသာသည် ပထမဦးဆုံးပေါ်လာသည့် ဘာသာဖြစ်ပြီး စပေါ်သည့် ခုနှစ် မသိရပါ။ ဗုဒ္ဓဘုရားအလောင်းသည် BC (ခရစ်တော် မပေါ် မီ) (၆၂၃) တွင် မွေးခဲ့သည်။ မိုဟာမစ် (အစ္စလာမ်) ထက် (၁၁၇၀) နှစ်စောပြီး မွေးခဲ့သည်။
- ပရိယတ္တိသာသနာ = စာသင်၊ ဟောပြော၊ ဆွေးနွေး
- ပဋိပတ္တိသာသနာ = စာအသိ၊ အပြောအသိကို ခန္ဓာကိုယ်တွင်း ရှုမှတ်
- ပဋိဝေဓသာသနာ = ခန္ဓာတွင်း ရှုမှတ်ကျင့်လို့ မဂ်၊ ဖိုလ်၊ နိဗ္ဗာန် အကျိုးရ
(ဃ) ကျေးဇူး = မိမိနှင့်အများအတွက် အကျိုးရှိစေသော ဆောင်ရွက်ချက်
ပုံတော် = (မျက်စိမြင်) - တခဏ၊ (ပျက်စီးနေ) - --- အကာ
ဂုဏ်တော် = (ဥာဏ်မြင်) - ထာဝရ၊ (တိုးတက်နေ) - --- အနှစ်
(စ) ပါရမီ = မြင့်မြတ်သူတို့ ဖြည့်စွမ်းရသောအလုပ်
Noble deed, Noble task
(ယခုဖြည့်ချင် ယခုဖြည့်လို့ ရ၊ မြင့်မြတ်စိတ်ထားပြီး ဖြည့်ရန်သာလို)
Posted by kyaw at 12:40 PM0comments
Posted by kyaw at 2:08 AM0comments